Ijenali yesayensi ye-elekthronikhi Izinkinga zanamuhla zesayensi kanye nemfundo ISSN 2070-7428 Uhlu Lwezifundo Eziphakeme Zokwethamela UMA RISC 0, 737 > Izinhlobo Nezinhlobo
Isifo sikashukela sokukhulelwa nokukhulelwa: izincomo zokwelashwa, izindlela zokwelashwa nokuvimbela
Isifo sikashukela mellitus (DM) sisho iqembu lezifo ezinama-metabolic ezibangelwa yiphutha secretion ye-insulin, isenzo se-insulin, noma ukuhlanganiswa kwalezi zinto, okuhambisana ne-hyperglycemia. Isifo sikashukela sohlobo lwenhlobo yokuqala isifo sikashukela esincike ku-insulin, yisifo esenziwa nge-autoimmune esisuka ngenqubo yokutheleleka kwe-etiology yegciwane noma ezinye izici zokuxineka okubi kakhulu noma ezingapheli zemvelo ngokumelene nesizinda sokuqagela okuthile kofuzo. Kwezinye izinhlobo zohlobo lwesifo sikashukela sohlobo I, abukho ubufakazi obukholisayo bemvelo ye-autoimmune futhi lesi sifo sithathwa njenge-idiopathic. Isifo sikashukela so Type I singaba khona nakubantu abakhuluphele noma abakhuluphele ngokweqile.
Ukudlanga kokuthayipha kohlobo I nokuthayipha 2 sikashukela kwabesifazane abaneminyaka yobudala bokuzala eRussia Federation kungu-0.9-2%. Isifo sikashukela sokutholwa sitholakala 1% yabesifazane abakhulelwe, ku-1-5% wamacala lapho kuvela khona isifo sikashukela noma isifo sikashukela sangempela.
Ngokusho kweWorld Health Organisation (WHO) Global Diabetes Report ka-2016 2, 16, ngonyaka ka-2014, abantu abadala abayizigidi ezingama-422 bahlushwa yisifo sikashukela emhlabeni sikashukela, esiphindwe kane kunedatha efanayo naku-1980 - izigidi eziyi-108. Ukwanda kwezigameko zesifo sikashukela kungahle kube ngenxa yokunyuka kwamanani okukhuluphala ngokweqile noma ukukhuluphala, umholo ophansi noma ophakathi ezweni. Ngo-2012, ukweqile kwe-glucose egazini uma kuqhathaniswa nokujwayelekile yimbangela yokufa kwezigidi ezingama-2,2, isifo sikashukela - izigidi ezi-1.5. I-DM, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni, ingaholela ekuhlaselweni yisifo senhliziyo, unhlangothi, ukwehluleka kwezinso, ukunqanyulwa umlenze, ukulahleka kombono nomonakalo wezinzwa, kwandisa ingozi yokufa ngaphambi kwesikhathi. Ukunganxephezelwa ngokuphelele kwesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa kukhulisa amathuba okufa kwe-fetus kanye nokukhula kwezinkinga eziningi 2, 16.
Ukulawulwa kwe-Glycemic kuyinto ebaluleke kakhulu engcupheni yokungalungi kwemvelo yokuzalwa, ukuwohloka kwempilo nokufa kwengqondo kwabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo Lokuqala kanye nohlobo II. Imiphumela ecindezela kakhulu yabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo I.
I-DM ngesikhathi sokukhulelwa inyusa ingozi yokukhula okulandelayo kokukhuluphala noma uhlobo II sikashukela enganeni 2, 16. Ngokusho kwe-American Association of Clinical Endocrinologists kanye ne-American College of Endocrinology - AACE / ACE (2015), sekusunguliwe ubudlelwano obusezingeni eliphakathi kokuhlangene kwe-glucose egazini lowesifazane okhulelwe kanye nesisindo sengane esanda kuzalwa, imvamisa ye-macrosomia ye-fetus kanye nokulethwa yisigaba se-cesarean. INational Institute for Health and Care Excellence (Nice), incwadi ebhekiswe kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela, igcizelela ukuthi yize kukhuphuka kabili ebungozini bokuthola umntwana onezimpawu zokungahambi kahle, ukuvela kokubeletha kwabesifazane abanesifo sikashukela kanye nengane yakhe kuxutshwe. futhi ingabhekwa kabusha. Umbiko we-WHO (2016) nawo ukhombisa ukuthi isifo sikashukela esingalawulwa ngesikhathi sokukhulelwa singaba nomthelela omubi kumama nasesibelethweni, ikhuphule kakhulu ingozi yokulahleka kwengane, ukungahambi kahle kokubeletha, ukuzala kwengane, ukushona kwengane, izinkinga zokubelethisa kanye nokushona komama nokufa komama. Noma kunjalo, akuqondakali ngokuphelele ukuthi iyiphi ingxenye yokuzalwa okuyinkimbinkimbi noma ukushona kukamama ne-perinatal okungahlanganiswa ne-hyperglycemia 2, 16.
Isihluthulelo sokwenza kahle imiphumela yokukhulelwa nokubeletha kukamama nengane sinikezwa ukulungiswa kwezinkinga ze-metabolic (ukukhuluphala ngokweqile), isinxephezelo sanoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela, ukwelulekwa ngokuqondile kwabesifazane abanesifo sikashukela 1, 4, 6, 13, 18. , ukufinyelelwa kwamatshe okuhlosiwe we-glycated hemoglobin (HbA1c), nabesifazane ababa nengozi yesifo sikashukela sokukhulelwa kunconywa ukuba benze isivivinyo sokubekezelela ushukela omlomo 1, 3, 4, 20.
Ngaphandle kwalokhu, imvamisa yokwelulekwa okunengqondo ayiphezulu. Ngakho-ke, ngokusho kukaFernandes R.S.et al. (2012), kuphela i-15.5% yabesifazane abanesifo sikashukela abahlelele ukukhulelwa futhi bakulungele, ngaphezu kwalokho, abangama-64% baqale babonana kumaviki awu-10 abakhulelwe.
I-endocrinologists yasekhaya igcizelela ekuhleleni ukukhulelwa kowesifazane onesifo sikashukela, okubandakanya: indlela yokuvimbela inzalo ngaphambi kokuqeda ukuhlolwa okudingekayo nokulungiselela ukukhulelwa, ukuqeqeshwa esikoleni sikashukela, ukwazisa ngobungozi obungahle bube khona kumama nakusenganeni, ukuthola isinxephezelo esifanele sesifo sikashukela ezinyangeni ezi-3-4 ngaphambi komqondo (ushukela we-plasma glucose / ngaphambi kokudla okungaphansi kuka-6.1 mmol / L, ushukela we-plasma 2 amahora ngemuva kokudla ngaphansi kuka-7.8 mmol / L, HbA ngaphansi kuka-6.0%).
Ngokusho kwezincomo zaseBrithani, kwabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo lwami abahlela ukukhulelwa, amanani abhekwayo kashukela ku-plillma yegazi capillary kufanele abe ngaphakathi kuka-5-7 mmol / L esiswini esingenalutho kanye no-4-7 mmol / L ngaphambi kokudla phakathi nosuku.
Kuze kube manje, kunokuphambana ngokubaluleka kokuxilonga kwenqubo ethile. Ngakho-ke, ukuvumelana kazwelonke waseRussia "Gestationalabetes mellitus: ukuxilongwa, ukwelashwa, ukuqapha kwangemva kokubeletha", okwamukelwa eRussia (2012), kuthi lapho owesifazane okhulelwe eqala ukuvakashela udokotela nganoma yikuphi okukhethekile amasonto angama-24 okukhulelwa (ukuhlolwa kwesigaba sokuqala), kuphoqelekile esinye sezifundo ezilandelayo kufanele senziwe: ukuzimisela kokuzila i-venous plasma glucose noma i-glycated hemoglobin (HbA1c.). Umhlahlandlela Wokuzivocavoca We-2015 AACE / ACE wonyaka ka-2015 uthi ngenxa yezinguquko zomzimba ngenxa yokukhulelwa okungathinta i-glycated hemoglobin, i-A1C akufanele isetshenziselwe ukuhlolwa noma ukuxilongwa kwe-GDM.
E-Russia, abesifazane abanesifo sikashukela sohlobo I esikhathini sokuqala bayanconywa: ukulawulwa kwengcindezi yegazi (BP), ukubheka lokho okuhlosiwe njengokuthi kungabi ngaphezu kwe-130/80 mm Hg. I-Art., Nge-hypertension ye-arterial - ukuqashwa kwe-antihypertensive therapy (ukuhoxiswa kwe-ACE inhibitors kuze kube yilapho kunqanyulwa ukusetshenziswa kokuvimbela inzalo). Kodwa-ke, kulandela izincomo ze-American Diabetes Association (2015), kuyadingeka ukuthi ucabangele i-110-129 mm Hg njengezinkomba ezihlosiwe zomfutho wegazi we-systolic ngesikhathi sokukhulelwa yinkimbinkimbi yesifo sikashukela noma isifo segazi esingelapheki. Ubuciko., Diastolic - 65-79 mm RT. Ubuciko. Kodwa-ke, amazinga omfutho wegazi ophansi angahlotshaniswa nokukhula kwengqondo okulimala. Umfutho wegazi we-systolic ojwayelekile ungaphansi kwe-118 mm Hg. Ubuciko. nomfutho wegazi we-diastolic - 74 mm RT. Ubuciko. awudingi ukuqokwa kokwelashwa kwe-antihypertensive.
Ngaphambi kokukhulelwa, kuyadingeka ukunquma izinga le-TSH ne-T4 yamahhala, i-AT to TPO kwabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo lwe-I ngenxa yesibalo esengeziwe sesifo se-thyroid, ukuthatha i-folic acid (500 mcg ngosuku), i-potassium iodide (250 mcg ngosuku), ukwelashwa kwe-retinopathy , i-nephropathy, ukuyeka ukubhema. Ine-HbA1c enezinga elingaphezulu kuka-7%, i-nephropathy ebabazekayo enesilinganiso se-serum sedinine esingaphezu kuka-120 μmol / L, GFR ngaphansi kwe-60 ml / min / 1.73 m 2, proteinuria ≥ 3.0 g yansuku zonke, isifo somfutho wegazi ongalawulwa, i-proliferative retinopathy ne-maculopathy. ngaphambi kokuqina kwe-laser ye-retina, ukuqina kanye nokwanda kwezifo ezingamahlalakhona ezingapheli kanye nezifo (sibonelo, isifo sofuba, i-pyelonephritis) - ukukhulelwa akufiseleki.
Kwabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo lwe-I, ukuhlolwa okucacile kuhlotshaniswa nobungozi obukhona bokukhula neuro-, nephro-, retinopathy, njll isikhathi eside ngaphambi kokukhulelwa.
Isibonelo, amathuba okuba nesifo sikashukela esingaphandle sikhulelwe sikhulu kangangokuba i-AACE / ACE (2015) ezigulini ezingaphansi kweminyaka engama-30 ngemuva kweminyaka emi-5 ngemuva kokutholwa kokuqala kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-II kanye nesifo sikashukela se-II neziguli ezineminyaka engaphezu kwengama-30 ngohlobo olusanda kutholwa lwesifo sikashukela. Izinga le-plasma creatinine, izinga lokuhlunga le-glomerular kanye ne-albhamuin kumchamo wokuhlolwa okufika ngesikhathi nokuqapha kwesigaba se-nephropathy yesifo sikashukela, ukuqhubeka kwayo.
Ngokuqala kokukhulelwa, kubalulekile ukunamathela kumigomo ethile yezinkambiso ze-glycemic. Isibonelo, e-UK, phambilini, ezincomeni ze-Nice, okuhlosiwe kwe-glucose esheshayo kwathathwa njengamagugu phakathi kuka-3.5 - 5.9 mmol / L, okwathi ngo-2015 kwavuselelwa futhi kwafana nesisu esingenalutho - ngaphansi kuka-5.3 mmol / L (4-5.2 mmol / L uma kwenzeka kungelashwa nge-insulin) , 1 ihora ngemuva kokudla - 7.8 mmol / L.
Kuzincomo zasekhaya zohlobo lwesifo sikashukela sohlobo I, amazinga e-glycemic atholakalayo kanjengokulandelayo: amazinga kashukela we-plasma kufanele abe sesiswini esingenalutho / ngaphambi kokudla / ngesikhathi sokulala / amahora angu-3 ngaphansi kuka-5.1 mmol / l, ihora eli-1 ngemuva kokudla ngaphansi kuka-7.0 mmol / l, inani le-HbA1c akufanele idlule ku-6.0%.
Ku-National Guide "Obstetrics" (2014), izindlela zokuthola isinxephezelo esifanele sesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa yilezi: glycemia 3.5-5.5 mmol / l, glycemia yakamuva 5.0-7.8 mmol / l, hemoglobin engaphansi kuka-6, I-5%, okufanele inqunywe yonke i-trimester yokukhulelwa.
Ukukhathazeka okuhambisana noshukela wohlobo I ngesikhathi sokukhulelwa kuhambisana nobungozi bokukhula kwe-hypoglycemia ku-trimester yokuqala yokukhulelwa. I-Hypoglycemia ingadala ukukhula kwe-intrauterine.
Imihlahlandlela yemitholampilo yokulawulwa kokukhulelwa kwabesifazane abanesifo sikashukela sezinhlobo ezahlukahlukene zomzimba 3, 4, 7-11, 15, 20, 24, 25 ibuyekezwa njalo emhlabeni jikelele. Ngo-2015, izindlela zokuvimbela, ukuxilonga nokwelapha isifo sikashukela zabuyekezwa futhi eRussia futhi zamukelwa Ama-algorithms wokunakekelwa kwezokwelapha okukhethekile kweziguli ezinesifo sikashukela. " Kwagcizelelwa ukuthi ukukhulelwa okuqhamuka ngemuva kwesifo sikashukela kuhlotshaniswa nezingozi ezaziwayo zempilo yomama (ukuqhubeka kwezinkinga ze-vascular (retinopathy, nephropathy, isifo senhliziyo), ukukhula njalo kwe-hypoglycemia, ketoacidosis, izinkinga zokukhulelwa (preeclampia, ukutheleleka, i-polyhydramnios), ngakho-ke kanye ne-fetus (ukushona okuphezulu kokushona kwengqondo, ukungahambi kahle kokuzalwa, izinkinga zangaphakathi). Enganeni ezelwe ngumama onesifo sikashukela, ubungozi bokuthola isifo sikashukela sohlobo lwayo ngesikhathi sempilo elandelayo singu-2%. Kuyaphawuleka futhi ukuthi uma kwenzeka ngiba nesifo sikashukela sikababa, le ngcuphe yengane ingafinyelela engcupheni yama-6%, lapho kukhona uhlobo lwesifo sikashukela kubo bobabili abazali - 30- 35%.
I-DM ingaholela ku-diabetesicopopathy (DF). I-DF ingaba ngezinhlobo ezimbili. Uhlobo lokuqala yi-hypotrophic, accounting ye- "1/3 yayo yonke i-DF, ingumphumela we-angiopathy, hyalinosis wemikhumbi emincane ye-placenta kanye nemithambo ye-fetus, ngenxa yokuthi ukufa komntwana kokuzalwa kwengane, ukubuyela emuva kokukhula kwe-fetus, ukukhubazeka kokukhula kungenzeka. Uhlobo lwesibili lwe-DF yi-hypertrophic; lukhula kubantu besifazane abakhulelwe abane-hyperglycemia engakhokhwanga, lapho kunezinkinga zemithambo. I-Macrosomy ihambisana nokungavuthi okukhulu kosana. I-DF ezinganeni ezisanda kuzalwa iyimbangela yokushintshwa kwezimo kokuqala kokukhubazeka kwasekuqaleni.
Ngokwezincomo zaseBrithani kusukela ngonyaka ka-2015, isikhathi sokulethwa kwabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo lwe-I no-II singafinyelela kumaviki angama-37 + 0 kuya kumaviki angama-38 + 6, nge-GDM - singandiswa size sifinyelele kumaviki angama-40 + ayi-6 uma kungekho zinkinga. Ama-endocrinologists aseRussia akholelwa ukuthi isikhathi sokulethwa esifanele singamaviki angama-38 ukuya kwengama-40, indlela efanelekile yokulethwa ilethwa ngomsele wokuzalwa wemvelo ngokuqapha ihora ne-glycemia, nayo ngemuva kokubeletha. I-National Guide "Obstetrics" (2015) ithi kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela, isikhathi esifanele sokubeletha sengane singamaviki angama-37- 38 okukhulelwa, futhi ukukhetha kunikezwa ukubeletha okuhleliwe ngomsele wemvelo wokuzalwa.
Abesifazane abanesifo sikashukela badinga izindlela ezikhethekile ngemuva kokubeletha. Ukuhlolwa kwe-Postpartum (ukuzimisela kokuzila ukudla kwegazi glucose hhayi i-GTT) kwabesifazane abane-GDM nakho kufanele kwenziwe emavikini ama-6 kuya ku-13 ngemuva kokubeletha. Ngokuhamba kwesikhathi, kunconyelwa incazelo ye-HbA1c Nice, 2015. Ngokungafani nezincomo zango-2008, abesifazane abane-Type I ne-II sikashukela bayanconywa, uma kungekho zingqinamba, ukulethwa okukhethiweyo ngokungeniswa kwabasebenzi noma isigaba se-cesarean uma kukhonjisiwe.
Izazi ezingama-Russian endocrinologists zixwayisa ukuthi kusukela osukwini lokuqala lwangemva kokubeletha (ngemuva kokuzalwa kwengane) kukhona ukwehla okukhulu kwesidingo se-insulin, esidinga ukuthi kukhethwe ngokushesha imithamo yayo (ngama-50% noma ngaphezulu), angahambelana nemithamo esetshenziswe ngaphambi kokukhulelwa. Ukuqina okuphezulu kwe-lactation kuhlotshaniswa nokwehla kwesisindo se-glucose kanye nokwehla kwamazinga e-insulin emavikini ama-6-9 wesikhathi sokuzala, ukuthuthukiswa kokuzwela kwe-insulin. I-lactation ingaba nemiphumela ezuzisayo ku-glucose metabolism kanye nomuzwa we-insulin, onganciphisa ubungozi besifo sikashukela ngemuva kokukhulelwa kwe-GDM (ERICA P. GUNDERSON, 2012, American Diabetes Association, 2015) 6, 17. Lapho kukhona isifo sikashukela sohlobo I, i-lactation ingahle ihambisane ne-postogum hypoglycemia, lokho owesifazane ngokwakhe okufanele aziswe ngakho, nokuthi i-glycemia kufanele ibhekwe.
Ngo-1995, uChew E.Y. futhi ashaye ucingo kudonswe ephuzwini lokuthi ukulawulwa okuqinile kwe-glycemic kungadosela ekuwohlokeni kwesimo se-retinopathy. Ukukhulelwa kuyisici esibonakalayo esiyingozi sokwanda kwe-retinopathy, ngakho-ke, ukuhlolwa kwe-ophthalmological kowesifazane onesifo sikashukela kufanele kwenziwe kaningi ngesikhathi sokukhulelwa futhi kungakapheli unyaka owodwa ngemuva kokubeletha.
Ngemuva kokubeletha, ukuvimbela inzalo kuboniswa okungenani iminyaka engu-1.5. Ukuvimbela inzalo kukhonjiswa kwabesifazane abasebenza ngocansi bobudala bokuzala abanesifo sikashukela abathatha izidakamizwa ezinobungozi obungenzeka be-teratogenic (angiotensin-converting enzyme inhibitors, statins, njll). Indima ebalulekile inikezwa ezenzweni zokufundisa ukuvimbela ukukhulelwa okungafuneki lapho kunesifo sikashukela phakathi kwentsha kanye nabantu abadala. Ukukhethwa kokuvimbela inzalo kuncike ekuthandweni kowesifazane kanye nokuba khona kwe-contraindication. Ngokwezincomo ze-Nice zango-2015, abesifazane abanesifo sikashukela bangasebenzisa izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo.
Ngakho-ke, uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-I sidinga i-obstetrician-gynecologists, ama-endocrinologists kanye neonatologists ukuthi bathuthukise imfundo yabo njalo, bethule izindlela ezintsha zokuvimbela, ukuxilonga kanye nokwelashwa kwezinkinga ezibangelwa ushukela ngokuhambisana nokukhulelwa.
Ukuxilonga kanye nenqubo yokuxilonga
Kaningi, isifo sikashukela esibhekwayo sitholakala engxenyeni yesibili yokukhulelwa. Ngaphezu kwalokho, lesi simo sinyamalala ngokuphelele lapho ingane izelwe.
Owesifazane angakhulelwa umntwana, ngenkathi ephula i-carbohydrate metabolism. Ngakho-ke yini okufanele uyenze ngemuva kokuthola ukuhlushwa kweglucose ephezulu?
Kunoma ikuphi, inhloso yokwelapha iyafana - ukugcina iphesenti likashukela lisesimweni esejwayelekile. Lokhu kuzokuvumela ukuba ubelethe ingane enempilo ngokuphelele. Ungayibona kanjani ingozi yokuthi umuntu ocansini onobuhle athole isifo sikashukela esisheshayo? Le pathology ingadida inkambo yokukhulelwa.
Noma esesigabeni sokulungiselela ukuzalwa kwengane engakazalwa, owesifazane uqobo angahlola izinga lobungozi besifo sikashukela sokukhulelwa:
ukuba khona kwamakhilogremu angeziwe noma ukukhuluphala (intombazane ngayinye ngokwayo ingakwazi ukubala inkomba yobukhulu bayo bomzimba),
isisindo somzimba sikhule kakhulu ngemuva kokufika eminyakeni yobudala,
ngowesifazane oneminyaka engaphezu kwamashumi amathathu
ngesikhathi sokukhulelwa esidlule bekukhona isifo sikashukela sokukhulelwa. Odokotela bathola ukugcwala okukhulu kwe-glucose kumchamo. Ngenxa yalokhu, ingane enkulu kakhulu yazalwa.
kukhona izihlobo ezinenkinga enkulu yokulimazeka kwe-carbohydrate metabolism,
Sitholakala kanjani isifo sikashukela sokukhulelwa? Bonke abantu besifazane kusukela ngeviki lama-23 kuye kwelama-30 lokukhulelwa banikezwa isivivinyo esikhethekile sokubekezelela ushukela we-glucose. Ngaphezu kwalokho, ekuhambeni kwayo, ukuhlangana koshukela akukalwa hhayi kuphela esiswini esingenalutho futhi ngemuva kwamahora ambalwa, kodwa futhi nemizuzu engama-50 eyengeziwe ngemuva kokudla.
Lokhu yilokho okusivumela ukuthi sinqume ukuba khona kohlobo lwesifo sikashukela okukhulunywa ngalo. Uma kunesidingo, udokotela unikeza izincomo ezithile maqondana nokwelashwa.
Ukuchazwa kohlolo lokubekezelela ushukela womlomo ukuthola lesi sifo okukhulunywa ngaso:
esiswini esingenalutho, izinga likashukela kufanele lifike ku-5 mmol / l,
ngemuva kwehora elilodwa - ngaphansi kwama-9 mmol / l,
ngemuva kwamahora amabili - ngaphansi kuka-7 mmol / l.
Kwabesifazane esesimweni esijabulisayo, ukugcwala koshukela emzimbeni esiswini esingenalutho kufanele kube okujwayelekile. Ngenxa yalokhu, ukuhlaziya okwenziwe esiswini esingenalutho akulungile ngokuphelele futhi kunembile.
Isifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa
Isifo sikashukela i-mellitus ngesikhathi sokukhulelwa yiqembu lezifo ezinama-metabolic ezibonakala nge-hyperglycemia eziphuma emaphutheni ekuvikelweni kwe-insulin, isenzo se-insulin, noma zombili. I-hyperglycemia engapheli kwisifo sikashukela iholela ekunqobeni nasekuthuthukisweni kokuntuleka kwezitho ezahlukahlukene, ikakhulukazi amehlo, izinso, amasistimu wezinzwa kanye nenhliziyo.
Imihlahlandlela yemitholampilo yesifo sikashukela sokukhulelwa
Banikeza imininingwane eyisisekelo nehlelekile yokuxilongwa kanye nokwelashwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa. Uma owesifazane osesikhundleni etholakele enalesi sifo, khona-ke unqunyelwa kuqala ukudla okuyisipesheli, umsebenzi owanele womzimba futhi welulekwa ukuthi alinganise ushukela wegazi wakhe izikhathi eziningana nsuku zonke.
Lokhu okulandelayo amanani wenani le-plasma glucose elidinga ukunakekelwa ngesikhathi sokukhulelwa:
isisu esingenalutho - 2.7 - 5 mmol / l,
ihora elilodwa ngemuva kokudla - ngaphansi kuka-7.6 mmol / l,
ngemuva kwamahora amabili - 6.4 mmol / l,
ngaphambi kokulala - 6 mmol / l,
Esikhathini esisuka ku-02:00 kuye ku-06:00 - 3.2 - 6.3 mmol / l.
Uma ukondleka okufanele nokuzivocavoca kungasizi ngokwanele ukubuyisa izinga le-glucose emuva kokujwayelekile, khona-ke owesimame osesimweni esijabulisayo unikezwe imijovo ye-hormone yokufakelwa okwenziwe ngokuthambile. Uhlobo luni lokwelashwa okufanele luqoke - udokotela ongumuntu kuphela onquma.
Ngokusho kwemithombo eyehlukene, kusuka ku-1 kuye kwayi-14% wabo bonke abakhulelwe (kuya ngesibalo sabantu abafundile nezindlela zokuxilonga ezisetshenzisiwe) ziyinkimbinkimbi yesifo sikashukela sokukhulelwa.
Ukudlanga kwesifo sikashukela sohlobo loku-1 nohlobo 2 kwabesifazane abaneminyaka yokuzala kungu-2%, kuthi u-1% wabo bonke abakhulelwe owesifazane abe nesifo sikashukela, ku-4,5% wamakhemikhali lapho kukhula isifo sikashukela, kufaka phakathi ne-5% yamacala esifo sikashukela esibonisa isifo sikashukela. isifo sikashukela.
Izimbangela zokukhuphuka kokungahambi kahle kwengane yi-macrosomia, hypoglycemia, ukungasebenzi kahle komzimba, isifo sokuhluleka ukuphefumula, i-hyperbilirubinemia, i-hypocalcemia, i-polycythemia, i-hypomagnesemia. Okulandelayo ukuhlukaniswa kukaP. White, okubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi ukubalwa kwengane kuzalwa, kuye ngokuthi ubude besikhathi sikashukela nokubandakanyeka kwesifo sikashukela sikamama.
I-Class A. Ukubekezelelwa kwe-glucose engasebenzi kahle kanye nokungabikho kwezinkinga - p = 100,
I-Class B. Isikhathi sikashukela esingaphansi kweminyaka eyi-10, siqhamuke ngaphezulu kweminyaka engama-20, azikho izinkinga zamakhemikhali - p = 67,
Class C. Isikhathi esisuka ku-10 siye ku-Schlet, esivele ngeminyaka eyi-10 - 19, azikho izinkinga ze-vascular - p = 48,
I-Class D. Isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-20, senzeka saba yiminyaka eyi-10, i-retinopathy noma ukubalwa kwemithambo yemilenze - p = 32,
Class E. Ukubalwa kwemikhumbi ye-pelvis - p = 13,
Isigaba F. Nephropathy - p = 3.
Ukwelashwa kwezidakamizwa sikashukela kokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe
Lapho ukukhulelwa kwenzeka ngenkathi uthatha iMetformin noma iGlibenclamide, kungenzeka ukwelula ukuzala kwengane.
Zonke ezinye izidakamizwa eziklanyelwe ukunciphisa ushukela kufanele zichithwe noma zithathelwe indawo nge-insulin.
Kulesi sikhundla, kungakuhle ukuthi uthathe kuphela i-pancreatic hormone yomsuka wokufakelwa. Kusavunyelwe ukusebenzisa amalungiselelo e-insulin omuntu wesikhathi esifushane nesiphakathi sokwenza, ama-insulin anemininingwane emincane futhi emide esebenza isikhathi eside ngokunconywa ngudokotela.
Izidakamizwa ezanele zokunciphisa ushukela
Imithi yokwehlisa ushukela eyenzelwe ukuphathwa ngomlomo ayivunyelwe ukusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa.Abesifazane abasesikhundleni kufanele badluliselwe ekwelashweni kwe-insulin.
Esikhathini sikashukela salokhu okuhlukahlukene, i-insulin yisilinganiso segolide. I-pancreatic hormone isiza ukugcina i-glycemia isezingeni elamukelekayo.
Kubaluleke kakhulu: i-insulin ayikwazi ukudlula kwi-placenta. Esikhathini sikashukela, njengomthetho, i-insulin enkulu iyanyibilika, ibamba okwesikhashana.
Kunganconyelwa ukuphathwa okuphindaphindiwe, kanye nokusikwa okuqhubekayo. Abesifazane abaningi abasezikhundleni bayasaba umlutha we-hormone. Kepha umuntu akufanele wesabe lokhu, ngoba lesi sitatimende asinakuthenjwa ngokuphelele.
Ngemuva kokuthi isikhathi sokucindezelwa kwama-pancreas sesiphelile, futhi umzimba uphinde ube namandla alo, i-insulin yomuntu izoqala ukukhiqizwa futhi.
Ukondliwa okufanele kwesifo sikashukela somzimba kungokulandelayo:
udinga ukudla amahlandla ayisithupha ngosuku. Ukudla kwansuku zonke kufanele kube nezidlo ezintathu eziphambili kanye namazwidi amabili,
Kuyadingeka ngokuphelele ukuyeka ukusetshenziswa kwama-carbohydrate angagayeka kalula. Lokhu kufaka amaswidi, izimpahla ezibhakiwe namazambane,
Qiniseka ukukala izinga lakho ushukela kaningi ngangokunokwenzeka nge-glucometer. Akunabuhlungu ngokuphelele. Lokhu kumele kwenziwe imizuzu engamashumi ayisithupha ngemuva kokudla ngakunye,
imenyu yakho yansuku zonke kufanele ibe cishe nengxenye yama-carbohydrate, ingxenye yesithathu yama-lipids enempilo kanye nekota yamaprotheni,
Inani lamandla eliphelele lokudla libalwa cishe ne-35 kcal ngekhilogremu yesisindo sakho esifanele.
Izindlela ezisebenzayo zokuvikela isifo sikashukela kungumzimba owanele womzimba. Njengoba wazi, ukudlala ezemidlalo kunciphisa kakhulu ingozi yokulimala komzimba.
Kepha abesifazane abangayeki ukuzivocavoca ngenkathi bethwele ingane bayabekelwa eceleni cishe ithuba lesithathu lesifo sikashukela.
Umuthi ohlukile uzosiza ukuguqula imetabolism futhi ulungise ukukhiqizwa kwe-insulin.
Nazi izindlela ezinhle zokupheka:
Okokuqala udinga ukufaka i-lemon entsha ku-grater enhle. Kufanele uthole izipuni ezintathu zalokhu kusabeka. Izimpande ze-parsley ehlanganisiwe kanye negalikhi egayiwe kufanele ingezwe lapha Umxube obangelwa kufanele ugcizelelwe isonto elilodwa. Kuyadingeka ukuyisebenzisa kwisipuni se-dessert kathathu ngosuku. Leli thuluzi liphephe ngokuphelele kwabesifazane abaphethe ingane,
Ungenza ujusi ojwayelekile kusuka kunoma yimiphi imifino emisha. Igcoba umzimba ngezinto eziningi ezisebenzayo namaminerali, futhi iphinda ivuselele ukukhiqizwa kwe-insulin ngamanyikwe.
Izimpawu zokukhishwa kwesisu zifaka phakathi:
ubunzima obuveziwe futhi obuyingozi bemithambo yethambo nenhliziyo,
isifo sikashukela esihlanganiswe ne-Rh factor,
isifo sikashukela kubaba nakunina,
isifo sikashukela esihlanganiswe ne-ischemia.
Mayelana nezindlela zesimanje zokuxilongwa nokwelashwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kule vidiyo:
Uma ngabe unesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa, kwathi ngemuva kokuzalwa kwengane, wanyamalala, khona-ke kufanele ungaphumuli. Kusenethuba lokuthi uzothola isifo sikashukela sohlobo 2 ngokuhamba kwesikhathi.
Ngokunokwenzeka, unokumelana ne-insulin - ukuzwela okungekuhle nge-hormone yamanyikwe. Kuyavela ukuthi esimweni esejwayelekile, lo mzimba ongasebenzi kahle. Futhi ngesikhathi sokukhulelwa, umthwalo phezu kwakhe uba mkhulu ngokwengeziwe. Ngenxa yalokhu, uyeka ukukhiqiza inani elifanele le-insulin.
Incwadi yolwazi yenzelwe odokotela bezingane ababelethisa kakhulu, odokotela be-Ultra nodokotela abajwayelekile.Incwadi ibuye ibe nezindlela zokuphatha nezokulethwa kwabesifazane abanesifo sikashukela sokukhulelwa (GDM) sonke isikhathi sokukhulelwa nangemva kokubeletha. Enye yezingxenye zencwadi ibekelwe indlela yokuxilongwa kwe-ultrasound ye-diopicathy yesifo sikashukela nokuzimisela kokuvuthwa kwe-fetus ku-II-III trimester yokuthinta okusekelwe ekuhlolweni kokulingana kwe-fetus kanye nokuzimisela kwezimpawu ze-visceral ze-diabetesicopopathy.
Le ncwadi isebenza njengesiqondiso samasu okuphatha we-GDM, aqukethe "amathuluzi" wokuhlola ikhwalithi yokunakekelwa kwabesifazane abakhulelwe abane-GDM.
Ukwakheka kweqembu elisebenzayo
Isayensi Ehlonishwayo YaseRussia Federation, Isazi Se-Russian Academy of Science, UProfesa, Udokotela Wezesayensi Yezokwelapha V. Radzinsky
Isazi seRussian Science of Science, uProfesa V.I. Krasnopolsky, Udokotela Wezesayensi Yezokwelapha, UProfesa V.A. Petrukhin
Udokotela wesayensi yezokwelapha i-Startseva N.M. Doct. uju Isayensi V.M. Guryeva, F.F. Burumkulova, M.A. Chechneva, prof. I-S.R.Mravyan, T.S. Budykina.
Udokotela oyinhloko weSibhedlela saseClinical No. 29 uqanjwe ngo-N.E. U-Bauman, Ophakanyiselwe ubuchwepheshe be-Medical Science, u-O. Papysheva, iPhini EliyiNgcweti Eyi-Chief Doctor for Obstetric and Gynecological Care, Clinical Hospital No. 29 Esipova L.N.
ISekela likaDokotela Omkhulu 1 Isibhedlela Somtholampilo siqanjwe ngemuva N.I. IPirogov kuma-Obstetrics kanye ne-Gynecology, Ozothunyelwa kwi-Medical Science u-Oleneva M.A.
Inhloko yoMnyango We-6 Wokukhulelwa I-Hospital Pathology, City Clinical Hospital №29 Lukanovskaya OB
I-Obstetrician-gynecologist Cand. uju Isayensi Kotaysh G.A.
Ozobe esethola ukhetho kwi-Medical Science T.S. Kovalenko, S.N. Lysenko, T.V. Rebrova, Ph.D. E.V. Magilevskaya, M.V. Kapustina, Udokotela Wezempilo. - Mat.Science Yu.B. Kotov.
Isifo sikashukela i-Gestationalabetes mellitus (GDM) siyisifo esijwayelekile kakhulu kubantu besifazane abakhulelwe, esivame ukuhlangana nababelethi bokubelethisa. Ukutholakala kwawo kungama-4- 22% wenani eliphelele lokukhulelwa.
Isici esibalulekile se-GDM ukungabi bikho ngokuphelele kwezimpawu zomtholampilo, okuholela eqinisweni lokuthi ukuxilongwa kwalo kwenziwa ngokubambezeleka okukhulu noma cha. Izinguquko eziphawuliwe ze-metabolic emzimbeni wabesifazane abakhulelwe abangenazo i-GDM kanye / noma eziphathwe kahle kuholele enanini elikhulu lezinkinga zokukhulelwa, ukuzalwa kwengane kanye nokuwohloka okuphezulu kwezingane ezisanda kuzalwa. Kulokhu, kusukela ngo-2013 eRussia, ngokwezincomo zomtholampilo zoMnyango Wezempilo waseRussia Federation 15-4 / 10 / 2-9478 ka-12/17/2013, kuhlolwe ngokuphelele bonke abesifazane abakhulelwe ukukhipha i-mellitus yesifo sikashukela sokukhubazekile .
Isifo sikashukela se-gestational mellitus (GDM) yisifo, iboniswa yi-hyperglycemia, etholwa kuqala ngesikhathi sokukhulelwa, kepha ingahlangabezani nenqubo yesifo sikashukela esibonakalayo.
Izenzo ze-obstetrician-gynecologist in ukuhlonza i-GDM:
Ezimweni zokuxilongwa kwe-GDM ku-1st trimester, ukudla kunikezwa ngaphandle kwama-carbohydrate agaya kalula (Isithasiselo 1) nokuziqapha nge-glycemia, ukugcina idayari yokuzihlola ye-glycemia.
· Iseluleko esikhethekile esivela ku-endocrinologist sokuxilonga ukuxilongwa kwe-GDM kanye / noma sihlole ukuhlolwa kwe-glucose.
· Ukuzithiba kwe-glycemia nokugcina idayari kuyaqhubeka kuze kube ukulethwa.
· Izinhloso zokuzibheka
Umphumela wePlasma Calibrate
Ihora eli-1 ngemuva kokudla
Imizimba ye-urone ketone
· Uma kutholakala isifo sikashukela (sikhulelwe ngokusheshauya kudokotela we-endocrinologist ukucacisa uhlobo lwesifo sikashukela futhi anikeze nokwelashwa. Esikhathini esizayo, ukuphathwa kwalaba besifazane abakhulelwe kwenziwa nge-grenecologist ye-inzalo kanye ne-endocrinologist.
· Lapho kunqunywa ukwelashwa kwe-insulin, owesifazane okhulelwe uholwa ngokubambisana nodokotela oyi-endocrinologist / Therapist nodokotela obambele inzalo. Ukulaliswa esibhedlela ukukhonjwa kwe-GDM noma ekuqaleni ukwelashwa kwe-insulin akudingeki futhi kuncike kuphela ebukhoneni bezinkinga zokubelethisa.
Ukuphindaphindwa okuningi kokuqashelwa yi-obstetrician-gynecologist:
Kuma-trimester wokuqala - okungenani isikhathi esingu-1 emavikini ama-4, kule nkathi yesibili okungenani isikhathi esingu-1 kumaviki ama-3, ngemuva kwamasonto angama-28 - okungenani isikhathi esingu-1 emavikini ama-2, ngemuva kwamasonto angama-32 - okungenani isikhathi esingu-1 ezinsukwini ezingama-7 - 7 ukuqapha ukuthuthukiswa okungenzeka kwezinkinga zokuvinjwa).
Ukuze wenze ukuhlolwa kwe-ultrasound, kudingeka insiza yokuxilonga i-ultrasound ifakwe inzwa ejwayelekile ye-convex esetshenziselwa izifundo zesibeletho kanye nemvamisa ye-3.5 MHz. Imiphumela ye-Optimum iyatholakala lapho kuhlolwa ithuluzi lesigaba esiphakeme noma sochwepheshe elifakwe inzwa eyi-2-6 MHz sensor frequency convex noma i-2-8 MHz sensor frequency convex.
· I-Fetal Macrosomy - okweqile kwe-90 kwephesenti lesisindo se-fetus esikhathini esithile sokutholwa komzimba. Kunezinhlobo ezimbili ze-macrosomia:
Uhlobo lohlobo lwama-macrosomia - ngokomthethosisekelo, olunqunywa ngofuzo, alunqunywa ileveli ye-glycemia yezimpawu zokubeletha futhi lubonakala ngokwanda okulingana kuzo zonke izinkomba ze-fetometric.
Uhlobo lwe-asymmetric lwe-macrosomia lubonwa ku-fetopathy yesifo sikashukela. Kukhona ukwanda kosayizi wesisu okungaphezu kwamaphesenti angama-90 wesikhathi sokutholwa esinikezwe izinkomba ezijwayelekile zosayizi wekhanda nobude be-hip.
· I-contour ekhanda ephindwe kabili
Ukuqina kwamafutha asentekenteke entanyeni> 0,32 cm
Ukuqina kwamafutha wesifuba nesisu> 0.5 cm.
Ukusuka emavikini angama-26 okungenani isikhathi esisodwa emavikini ama-4, kusuka kumaviki angama-34 okungenani isikhathi esisodwa emavikini ama-2, kusuka kumaviki angama-37 - okungenani isikhathi esisodwa ezinsukwini eziyi-7 noma ngaphezulu njengoba kukhonjisiwe.
abesifazane abakhulelwe abane-GDM benziwa ngokwezinkomba zokubelethisa ezikhungweni ezithinta izigaba ezingama-2 kuya kwezingu-2, kanti uma kunqunywa ukwelashwa kwe-insulin, ukwelashwa kuyenziwa esibhedlela esisodwa noma emnyangweni wokubeletha ngaphansi kokuqashwa kwe-endocrinologist.
Kwenziwa ngesisekelo esingaphandle kwaso nangosizo lwedayari yokuzihlola umfutho wegazi (isilinganiso esizimele somfutho wegazi yisiguli izikhathi ezi-2 ngosuku), kulandelwa ukwethulwa kudokotela lapho kuvakashelwa. Ezimweni lapho ngaphezu kwe-1/3 yazo zonke izilinganiso zokuzihlola kokucindezela kwegazi kudlula i-130/80 mm Hg, ukwelashwa okusebenzayo kwe-antihypertensive kuyadingeka.
· Ngokwezinkomba, umfutho wegazi ubhekwa nsuku zonke (iziqephu zokwanda kwengcindezi yegazi ngesisekelo esingaphandle, ukwanda kwengcindezi yegazi ngokusho kwidayari yokuzihlola kokucindezela kwegazi, ukubonakala kwe-proteinuria, i-edema, noma i-preeclampia enomlando wokuqala).
Ukulawula isisindo somzimba
Ukuqapha isisindo somzimba kwenziwa njalo ngeviki. Ukuthola isisindo esivumelekile kukhonjiswa ku-Isithasiselo 2.
· Ukulungisa ukukhuluphala ngokweqile kwesisindo, ukwehla kokudla kakhalori yansuku zonke kufanele kunconywe (ukuncipha kwenani lokudla okuqediwe, ukubekelwa eceleni kokudla okunama-khalori amaningi ekudleni, njll.) Kanye nokwenyuka komsebenzi wezimoto. Abesifazane abakhulelwe kufanele bahambisane nezincomo zokudla kokuzuza kwesisindo se-pathological njalo.
Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela akufanele babelwe izinsuku zokuzila!
ngesikhathi sokukhulelwa esiyinkimbinkimbi yi-GDM, kubalulekile ngoba kuvumela ukuthuthukisa isinxephezelo sikashukela, kuvimbela ukutholwa kwesisindo se-pathological, kunciphisa i-macrosomia ye-fetus kanye nemvamisa yokulethwa kwesisu 6, 7. Izinhlobo ezinconyelwayo zomthwalo, umthamo womsebenzi, ubukhulu bawo, izinhlobo zomsebenzi kanye ne-contraindication kukhonjisiwe kusiThasiselo 3 .
Ø Abesifazane abanesifo sikashukela esibonakalayo esatholakala ku-trimester yokuqala bayacelwa ukuthi baqhube ngokucophelela ukuhlolwa kokukhulelwa okokuqala emavikini ayi-11 ukuya ku-14 kokukhulelwa, ngoba i-hyperglycemia ingaba nomphumela we-teratogenic ngaphambi kokukhulelwa nasezigabeni zokuqala zokukhulelwa. Imvamisa yokulimala kwabesifazane abanjalo iphindwe izikhathi ezingama-2-3 kunesibalo sabantu.
Ø Izidakamizwa ezinciphisa ushukela ngomlomo ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa amabele azivunyelwe ku-Russian Federation.
Ukwelashwa kwezinkinga zokuvimbela inzalo
Ukwelashwa kwesongo sokuqedwa kokukhulelwa nganoma yisiphi isikhathi kwenziwa ngokwezinhlelo ezamukelwa ngokuvamile. Ukusetshenziswa kwama-gestagen kushukela akunakuphikiswa. Ngokwezinkomba, i-prophylaxis yesifo sokuphefumula yosana olusanda kuzalwa yenziwa ngokwezinhlelo ezamukelwa ngokuvamile. Ngokuphikisana nesizinda sokwelashwa kwe-corticosteroid, ukukhuphuka kwesikhashana kwe-glycemia kungenzeka, okudinga ukuziqapha ngokucophelela futhi, kwezinye izimo, ukulungiswa kwe-insulin.
· Ekwelapheni i-hypertension ye-arterial yanoma iyiphi i-genesis e-GDM, izidakamizwa ezisebenza phakathi nendawo (methyldopa), abamelene ne-calcium (i-nifedipine, i-amlodipine, njll.), Kusetshenziswa ama-beta-blockers. Ama-inhibitors we-angiotensin-aguqula i-enzyme, ama-blocker ama-angiotensin-II ama-receptor blockers, ama-alkaloids we-rauwolfia awabekwanga.
Ukujoyina i-hypertension gestational (GAG) noma i-preeclampsia kudinga ukwelashwa esibhedlela sokubelethisa. Ukwelashwa kwenziwa ngezinhlelo ezamukelwa ngokuvamile.
· Uma izimpawu ze-ultrasound ze -abetopathy yesifo sikashukela ne-polyhydramnios zitholakala ezimweni lapho kuhlolwe khona ukubekezelela ushukela ngomlomo kungakenziwa isikhathi sokuhlolwa, kuhlolwa glucose wesisu ongenalutho. Uma ngabe le yinkomba >I-5.1 mmol / l, kungcono ukunquma ukudla kanye nokuzithiba kwe-glycemia, kanye nokusebenzisa amaqhinga wokuphatha abesifazane abakhulelwe abane-GDM.
· Ukuthola i-fetopathy yesifo sikashukela noma i-polyhydramnios ngokuhlolwa kwe-ultrasound kuyinkomba yokuqokwa kokwelashwa kwe-insulinngisho ne-glycemia ejwayelekilengokuya kudayari yokuzithiba. Ukunquma ukwelashwa kwe-insulin, owesifazane okhulelwe ngokushesha uya ku-endocrinologist.
Ukuphathwa kwabesifazane abakhulelwe abane-GDM kuyadingeka
indlela yokuhlangenwe nakho kwezindlela eziningi (i-contretrician-gynecologist, udokotela ojwayelekile / i-endocrinologist / udokotela ojwayelekile)
Udokotela obelekela inzalo kufanele anikeze i-endocrinologist imininingwane ekwakhekeni kwe-macrosomia / diabetesicopopathy ku-fetus
Ukulethwa kwabesifazane abakhulelwe abane-GDM
Abesifazane abakhulelwe abane-GDM, ukudla okunesinxephezelo, futhi lapho kungekho khona izinkinga zokubelethisa bazalwa esibhedlela esisezingeni eliphakathi nenqanaba 2, abane-insulin therapy noma izinkinga zokubelethisa esibhedlela esiphakathi nendawo.
Izinsuku zokulaliswa esibhedlela okuhleliwe kweziguli ezine-GDM zokubeletha zinqunywa ngokuhlukile ngokuya ngobukhona bezinkinga zokubelethisa, izici zobungozi obukhona.
· Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sokutholwa komzimba, ukudla okuncelwayo futhi uma kungekho zinkinga ezibhekene nezokubelethisa bangeniswa esibhedlela ukuze bezalwe ngaphambi kwamaviki angama-40 noma ukuqala kokubeletha.
Nge-GDM ekwelashweni nge-insulin, ukungabikho kwezinkinga ezithinta izibeletho, ngaphandle kwezimpawu zesifo sikashukela kanye nomzimba olawulwa kahle we-carbohydrate metabolism - ukulaliswa esibhedlela ngabazali kungakapheli amasonto angama-39 ekhulelwe.
Lapho kukhona i-macrosomia kanye / noma isifo sikashukela, i-polyhydramnios, ukulaliswa esibhedlela okuhleliwe kungakapheli amasonto angama-37.
Imigomo nezindlela zokulethwa.
I-GDM ngokwayo akuyona inkomba yesigaba se-caesarean kanye nokulethwa kwangaphambili. Ukuba khona kwe-fetopathy yesifo sikashukela futhi akuyona inkomba yokulethwa ngaphambi kwesikhathi ngesimo esanelisayo sikamama kanye nese-fetus.
Ukulethwa kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sokukhulelwa.
Isifo sikashukela sokutholwa akusona isibonakaliso sokulethwa yisigaba se-caesarean (CS).
Indlela yokulethwa inqunywa ngokuya ngesimo sokuvimbela inzalo kowesifazane okhulelwe ngamunye.
Izinkomba zesigaba se-cesarean ku-GDM ngokuvamile zamukelwa kuma-labetter. Uma ingane ikhishwe ngezimpawu zesifo sikashukela ngenhloso yokugwema ukulimala kokubeletha (i-dystocia yamahlombe), kungakuhle ukuthi sandise izinkomba ze-CS kwezinye izimo (isisindo esilinganiswayo se-fetus singaphezu kwama-4000 g).
Imibandela yesigaba se-cesarean esihleliwe ye-GDM inqunywa ngokwahlukana, ngesimo esanelisayo sikamama kanye nese-fetus, isinxephezelo sikashukela kanye nokungabikho kwe-macrosomia / diabetesicopopathy, izinkinga zokuvimbela inzalo, ukwelula isikhathi sokukhulelwa kuze kube ngamaviki angama-39 kuya kwengama 40 kungenzeka.
Lapho kukhona i-macrosomia / diabetesic fetopathy, ukunwetshwa kokukhulelwa isikhathi esingaphezu kwamasonto angama-38- 39 akulungile.
Nge-GDM enxephezelwe kahle, ukungabikho kwengxaki yokutholwa kokubeletha kanye nokubelethisa, isimo esanelisayo sikamama nengane, ukukhula okuzenzakalelayo komsebenzi wokuzala kuyinto ephezulu. Lapho ingekho, kungenzeka ukwelula isikhathi sokukhulelwa isikhathi esingamaviki angama-40 izinsuku ezingama-5, kulandelwe ukufakwa kwabasebenzi ngokwezivumelwano ezamukelwa ngokuvamile.
Izici zokulawulwa kwezabasebenzi ngomsele wokuzalwa wemvelo nge-GDM
Kwenziwa ekuqaleni kwabasebenzi, ngamanani ajwayelekile - ukuguqukela esimweni esenzeka ngezikhathi ezithile sokuhlola isimo se-fetus ngokuya nge-protocol yokusebenza. Lapho ukwenziwa lokungeniswa kwe-oxytocin infusion noma i-analgesia ye-epidural kwenziwa, kwenziwa ukuqapha okuqhubekayo kwe-cardi jpg.
kwenziwe ngokwezinqubomgomo ezikhona.
Ukulawulwa kwe-glycemic kwezabasebenzi
Kwenziwa (elabhorethri noma kusetshenziswa i-glucometer ephathekayo) kuphela kwabesifazane abakhulelwe abathola ukwelashwa kwe-insulin, ku-regimen 1 time njalo emahoreni ayi-2-2,5.
Ezimweni lapho owesifazane okhulelwe ngaphambi kokuqala kokubeletha eye wafaka i-insulin esebenza isikhathi eside, ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia emtholampilo noma ilabhorethri, edinga ukuphathwa okungaphakathi kwekhambi le-glucose, kungenzeka ngesikhathi sokubeletha.
Ukwelashwa kwe-insulini ngokuzala kwabesifazane abakhulelwe abane-GDM akwenziwa.
Ekupheleni kwesikhathi sesibili sokusebenza, izindlela zokuthibela kumele zithathwe ukuvikela i-dystocia yamahlombe e-fetus.
· Ukuqala kwemizamo yokuphikisana kuphela ngemuva kokusika ikhanda
Ukumiliselwa kwe-Oxetocin ekugcineni kwesigaba 2 somsebenzi
Uma i-dystocia yamahlombe yenzeka, umuntu kufanele aqondiswe ngamasu achazwe kwincwadi kazwelonke yezokubeletha.
Ukuba khona kwe-neonatologist ekuzalweni kwengane nge-GDM kuphoqelekile!
Uhlelo lokunakekelwa kwangemva kokubeletha
Ngemuva kokubeletha, zonke iziguli ezine-GDM ziyayeka i-insulin therapy. Ezinsukwini ezintathu zokuqala ngemuva kokuzalwa, ukulinganisa okuphoqelekile kweglucose ye-venous plasma kuyadingeka ukuze kutholakale ukwephulwa okungenzeka kwe-carbohydrate metabolism.
Ukwelashwa ku-GDM akuqinisekisiwe.
Emavikini langu-6 kuya kwe-12 ngemuva kwekuzala bonkhe labesifazane ngekushesha kwe-venous plasma glucose
Kuyadingeka ukwazisa izingane nodokotela abasebasha ngesidingo sokuqapha isimo sokudla okubangelwa yi-carbohydrate metabolism kanye nokuvinjelwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 enganeni ebilawulwa ngumama wayo i-GDM.
Imisebenzi esemqoka esigabeni sokuhlela ukukhulelwa kwabesifazane abathola i-GDM
Ukudla okuhlose ukwehlisa isisindo ngokweqile.
Ukuzivocavoca okwenziwe ngcono
· Ukukhonjwa kanye nokwelashwa kwezifo ze-carbohydrate metabolism.
Ukwelashwa kwe-hypertension ye-arterial, ukulungiswa kwezifo ze-lipid-cholesterol metabolism.
DIET AT GESTATIONAL SUGAR DIABETES
Imikhiqizo engafakwa ngokuphelele ngaphandle kokudla:
Ushukela, i-confectionery, ama-pastries amnandi, u-ayisikhilimu, uju, ujamu, ujamu, wonke amasipuni wezithelo (ngisho nangaphandle koshukela ongeziwe), imikhiqizo yobisi equkethe ushukela (ama-yogurts ezithelo, i-kefir, njll, ama-curds agobile, ama-curds), ubhanana , amagilebhisi, izithelo ezomisiwe, izinsuku, amakhiwane, amakhompiyutha, i-jelly, isoso, imayonnaise, i-ketchup, i-fructose, i-xylitol kanye nemikhiqizo ye-sorbite, okusanhlamvu okuphathwa ngokushisa (okusheshayo) noma irayisi eshisiwe. Inyama enamafutha, amasoseji anamafutha, amasoseji, ama-pastes ...
Imayonnaise, ibhotela, ushizi ophuzi (45-50%)
Imikhiqizo edinga ukukhawulelwa kokudla okunempilo, kepha ingafakwanga ngokuphelele:
Ama-apula, amawolintshi, i-kiwi nezinye izithelo (isithelo esisodwa sasemini nesidlo sasemini). Izithelo zingcono kakhulu ukudla ekuseni.
durum kakolweni pasta (1 ukudla kwansuku zonke).
amazambane (ukudla oku-1 nsuku zonke, kungcono ukusebenzisa amazambane abhakisiwe, kunokuba uthosiwe, ubilisiwe noma ubilisiwe amazambane),
isinkwa (akunandaba ukuthi simnyama noma simhlophe, izingcezu ezi-3 ngosuku), mhlawumbe ngamabele noma amabele)
okusanhlamvu (i-oat, i-buckwheat, i-millet porridge, emanzini noma ubisi olungesilo skim, ngaphandle kwebhotela), ilayisi elinsundu. (Ukudla okukodwa ngosuku).
Amaqanda (ama-omelet, amaqanda abilisiwe) angasetshenziswa izikhathi ezi-1-2 ngesonto.
Ubisi 1-2% (kanye ngosuku) akukho ngaphezu kwengilazi eyodwa.
Ukudla ongakudla ngaphandle kokukhawulela.
Yonke imifino (ngaphandle kwamazambane) - (ukhukhamba, utamatisi, iklabishi, isaladi, isithombo, amakhambi, i-zucchini, isitshalo seqanda, isikwashi)
Amakhowe, ukudla kwasolwandle (akuthathiwe)
Imikhiqizo yenyama (kufaka phakathi inkukhu nenkukhu) nemikhiqizo yezinhlanzi,
Ushizi wekotishi onamafutha aphansi, afakwe kangcono ngaphandle kwe-Whey (2-5%), ushizi (10-17%), imikhiqizo yobisi (ngaphandle koshukela ongeziwe), hhayi okubabayo, hhayi okunamafutha hhayi amasoseji obhemayo, amasoseji, amasoseji, imifino yezithelo (utamatisi, ngaphandle usawoti, namajusi emifino axubile).
Lapho kukhona ukukhuluphala - imikhawulo yamafutha ekudleni (konke ukudla ngamaphesenti amancane, kodwa hhayi ngamafutha ngokuphelele). Ngokukhuphuka kwengcindezi yegazi - ukunciphisa usawoti ekuphekeni, ungangezi ekudleni okuqediwe. Sebenzisa usawoti we-iodized.
Ukudla okuhlanu ngosuku - izidlo ezintathu eziphambili kanye namazwidi amabili. Ebusuku, ingilazi ye-kefir noma i-yogurt enamafutha amancane (kodwa hhayi izithelo!) Iyadingeka. Faka ukudla kwamaphrotheni nemifino kukho konke ukudla. Okokuqala, kungcono ukudla amaprotheni nemifino, bese nama-carbohydrate. Naka inani lama-carbohydrate (imikhiqizo ekhawulelwe, kepha engafakwanga) ekudleni ngakunye. I-100-150 g yama-carbohydrate amade (izingxenye ezi-12 ezijwayelekile) zingadliwa ngosuku, zizisabalalisa ngokulinganayo usuku lonke. Sebenzisa ukupheka, ukusaphaza, ukubhaka, kepha hhayi ukuthosa ekuphekeni.
1 Ukusebenzela = 1 isipuni sesinkwa = 1 isithelo esiphakathi = izipuni ezi-2 ngesilayidi sepalishi elilungiselelwe, ipasta, amazambane = 1 inkomishi yomkhiqizo wobisi owukeziwe
ukusatshalaliswa okuphelele kokusebenza kosuku lonke:
Ukudla kwasekuseni - 2 servings
Isidlo sasemini - 1 iyakhonza
Isidlo sasemini - servings 2-3
Ungadla - 1 okusebenzayo
Dinner - 2-3 servings
Isidlo sesibili - 1 okusebenzayo
Ukudla kwasekuseni akumele kube ngaphezu kwama-35-36 g wama-carbohydrate (akukho ngaphezu kwe-3 XE). Isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa asidluli i-3-4 XE, ukudla okulula oku-1 XE. Ama-carbohydrate abekezelelwa kakhulu ekuseni.
Kumadayari wokudla, kuyadingeka ukukhombisa isikhathi sokudla kanye nenani elidliwayo, kumagremu, izinkomishi, izinkomishi, njll. Noma ubale ama-carbohydrate ngokuya ngethebula amayunithi esinkwa.
Ukuthola isisindo esivumelekile ngesikhathi sokukhulelwa
BMI ngaphambi kokukhulelwa
I-OPV yokukhulelwa (kg)
I-OPV ku-2nd ne-3. ngo-kg / ngeviki
Ukushoda kwesisindo somzimba (BMI 11, 5-16
Ngokweqile (BMI 25.0-29.9 kg / m²)
Ukukhuluphala (BMI≥30.0 ​​kg / m²)
· I-Aerobic - ukuhamba, ukuhamba kweNordic, ukubhukuda echibini, ukushushuluza izwe, ukuzivocavoca ngesithuthuthu.
I-Yoga noma i-Pilates ngendlela eguquliwe (ngaphandle kokuzivocavoca okuphazamisa ubuyayo enhliziyweni)
Ukuqeqeshwa Kwamandla okuhlose ukuqinisa izicubu zomzimba nezingalo.
Kunconyiweivolumu yomsebenzi: Imizuzu engama-150-270 ngesonto. Ngokuncono, lo msebenzi usatshalaliswa ngokulinganayo ngezinsuku zeviki (isb., Nsuku zonke okungenani imizuzu engama-25 ukuya kwengama-35).
Kunconyiweubukhulu: 65-75% yesilinganiso senhliziyo max . Isilinganiso senhliziyo max kubalwa kanjena: isilinganiso senhliziyo max = 220 - iminyaka. Futhi, ubukhulu bungahlolwa ngokuhlolwa “kokuguqula”: ngenkathi owesimame ekwazi ukuqhuba ingxoxo phakathi nokuzivocavoca, kungenzeka ukuthi akazithinti.
Akunconyelwe ngesikhathi sokukhulelwa: imisebenzi ebuhlungu (ukushushuluza, ukugibela iqhwa, ukuhamba ngesikebhe, ukushushuluza amanzi, ukusebenzisa i-surf, ukuhamba ngebhayisekili, umgwaqo wokuzivocavoca nokugibela amahhashi), ukuxhumana nemidlalo yomdlalo (isb. hockey, isibhakela, ubuciko bempi, ibhola kanye ne-basketball, ithenisi), gxuma, ukugobhoza kwe-scuba.
Umsebenzi womzimba kufanele ube kunqatshiwenezimpawu ezilandelayo:
Ukuvela kokuphuma kwegazi okuphuma esithweni sangasese
Izinkontileka zesisu esibuhlungu
Ukuvuza kwamanzi u-Amniotic
Ukuzizwa ukhathele kakhulu
I-Dyspnea ngaphambi kokuqala umsebenzi
Ukuphambana ngokuphelele Ukuzivocavoca umzimba ngesikhathi sokukhulelwa:
· Isifo senhliziyo esibalulekile ngokwezifiso (ukuhluleka kwenhliziyo 2 ama-funkts. Isigaba nangaphezulu)
· Ukushoda komlomo wesibeletho noma ukuqina komlomo wesibeletho
Ukukhulelwa okuningana okunengozi yokuzalwa ngaphambi kwesikhathi
Iziqephu zokubona endaweni ye-trimester yesibili noma yesithathu
IPlacenta previa ngemuva kwamasonto angama-26 wokukhulelwa
I-Preeclampsia noma i-gestational arterial hypertension
I-Anemia Ebukhali (Hb
Izimo lapho umbuzo wokuqokwa komsebenzi womzimba, ifomu lawo nevolumu kusombululwa ngawodwana:
· I-anemia elinganiselayo
Ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo okuphawuleka ngokwezifiso
Isifo se-pulmonary esingamahlalakhona
· Ukukhuluphala okuphezulu kwe-morbid (i-pregravid BMI> 50).
Isisindo esiphansi ngokweqile (BMI ngaphansi kuka-12)
Impilo yokuhlala phansi ngokweqile
Ukubuyiselwa kokukhula kwengane ngesikhathi sokukhulelwa esinikeziwe
Kulawulwa kabi umfutho wegazi ophakeme
Isithuthwane esilawulwa kabi
Ukubhema ugwayi ongaphezu kwama-20 ngosuku.
1. UHod, M., Kapur, A., Sacks, D.A., Hadar, E., Agarwal, M., Di Renzo, G.C. et al, I-International Federation ye-gynecology kanye ne-obstetrics (FIGO) isinyathelo se-gestationalabetes mellitus: umhlahlandlela we-pragmatic wokuxilongwa, ukuphathwa nokunakekelwa. Int J Gynaecol Obstet. Ngo-2015, 131: S173-211.
2. Izincomo zomtholampilo (protocol yokwelashwa) "I-mestitus yesifo sikashukela se-Gestational: ukuxilongwa, ukwelashwa, ukuqapha kokubeletha" MH RF 15-4 / 10 / 2-9478 kusuka ngo-12/17/2013).
3. I-Order yoMnyango Wezempilo waseRussia Federation Nombolo 475 lango-12/28/2000 "Ekuthuthukiseni ukuxilongwa kwengane ekuvinjelweni kwezifo ezibangelwa ukuzalwa ezinganeni"
4. I-Order yoMnyango Wezempilo waseRussia Federation kaNovemba 1, 2012 No. 572n "Inqubo yokuhlinzekwa kwezokunakekelwa kwezokwelapha ku-profiles" ze-inzalo kanye ne-gynecology (ngaphandle kokuthi kusetshenziswe ubuchwepheshe bokuzala bokuzalisa) "
5. I-Order yoMnyango Wezempilo waseRussian Federation yangoFebhuwari 10, 2003 No. 50 "Ekuthuthukiseni ukunakekelwa kokubelethisa kanye nokwelashwa kwabantwana emitholampilo engaphandle"
6. USklempe Kokic I, u-Ivanisevic M, uBiolo G, uSununic B, uKokic T, uPotot R. Inhlanganisela ye-aerobic ehlelekile kanye nokuvivinya kokuzivocavoca kuthuthukisa ukulawulwa kwe-glycemic kwabesifazane abakhulelwe abatholakala benesifo sikashukela sokukhulelwa. Isivivinyo esilawulwa ngokungahleliwe. Ukuzalwa Kwabesifazane. 2018 Aug, 31 (4): e232-e238. doi: 10.1016 / j.wombi.2017.10.10.004. Epub 2017 Oct 18.
7. UHarrison AL, Shields N, Taylor NF, Frawley HC. Ukuzivocavoca kuthuthukisa ukulawulwa kwe-glycemic kwabesifazane abatholakala benesifo sikashukela sokukhulelwa: Ukubuyekezwa okuhleliwe. J Physiother. 2016.62: 188-96.
8. URadzinsky V.E., Knyazev S.A., Kostin I.N. Ingozi yokubeletha. Imininingwane ephezulu - ingozi encane umama nengane. - EMoscow: Eksmo, 2009 .-- 288 k.
9. Izinto zokubeletha. Ubuholi bukazwelonke. Kuhlelwe nguG.M.Savelieva, V.N.Serov, G.T.Suhikh, GEOTAR-Media. 2015.S. 814-821.
Izimbangela zesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa
Isifo sikashukela esikhulelwe, noma isifo sikashukela se-gestagen, kuwukwephula ukubekezelela i-glucose (NTG) okwenzeka ngesikhathi sokukhulelwa bese kunyamalala ngemuva kokubeletha. Isimo sokuxilongwa kwesifo sikashukela esinjalo sokweqile kwanoma yiziphi izinkomba ezimbili ze-glycemia egazini le-capillary kusuka kula manani amathathu alandelayo, i-mmol / l: esiswini esingenalutho - i-4.8, ngemuva kwe-1 h - 9.6, nangemva kwamahora ama-2 - 8 ngemuva komthwalo womlomo ongama-75 g we-glucose.
Ukubekezelelwa kwe-glucose engaphazanyiswa ngesikhathi sokukhulelwa kukhombisa umphumela womzimba wamahhala we-placental hormones, kanye nokumelana ne-insulin, futhi kuthuthukiswa cishe kwabangu-2% abesifazane abakhulelwe. Ukutholwa kokuqala kokubekezelela i-glucose engalungiseki kubalulekile ngenxa yezizathu ezimbili: okokuqala, abesifazane abangama-40% abanesifo sikashukela abanomlando wokukhulelwa bakhulisa isifo sikashukela semitholampilo kungakapheli iminyaka eyi-6-8 futhi, ngakho-ke, badinga ukulandelwa, futhi okwesibili, ngokumelene nesizinda sokwephulwa ukubekezelela i-glucose kwandisa ingozi yokushona kwe-perinatal kanye ne-fetopathy ngendlela efanayo nasezigulini ezinesifo sikashukela esivele sikhona.
Ekuhambeleni kokuqala kowesifazane okhulelwe kudokotela, kuyadingeka ukuhlola ubungozi bokuthola isifo sikashukela sokukhulelwa, ngoba amanye amaqhinga okuxilonga athembele kulokhu. Iqembu lengozi ephansi yokuba nesifo sikashukela sokumelana komzimba lifaka abesifazane abangaphansi kweminyaka engama-25 ubudala, abanesisindo esijwayelekile somzimba ngaphambi kokukhulelwa, abangenawo umlando wesifo sikashukela ezihlotsheni zezihlobo zezinga lokuqala kinship, abangakaze babe nakho ukuphazamiseka kwangaphambilini kwe-carbohydrate metabolism (kufaka ne-glucosuria), umlando ongavinjelwe. Ukwabela umuntu wesifazane eqenjini elisengozini ephansi yokuba nesifo sikashukela soku gestational, zonke lezi zimpawu ziyadingeka. Kuleli qembu labesifazane, ukuhlolwa usebenzisa ukuhlolwa kwengcindezelo akwenziwa futhi kukhawulelwe ekuqapheleni okujwayelekile kokuzila ukudla kwe-glycemia.
Ngokombono ongathandeki wochwepheshe basekhaya nabangaphandle, abesifazane abanokukhuluphala okukhulu (BMI ≥30 kg / m 2), i-mellitus yesifo sikashukela ezihlotsheni zezihlobo zokuqala kinship, umlando wesifo sikashukela sokukhubazeka noma yisiphi isifo se-carbohydrate metabolism basengozini enkulu yokuba nesifo sikashukela sokukhulelwa. ngaphandle kokukhulelwa. Ukwabela owesifazane eqenjini elinobungozi obukhulu, enye yezimpawu ezisohlwini lwanele.Abesifazane laba bahlolwa ekuhambeleni kokuqala kudokotela (kuyanconywa ukuthola ukuthi iglucose egazini esiswini esingenalutho kanye nokuhlolwa okune-100 g kashukela, bheka inqubo engezansi).
Iqembu elinobungozi obujwayelekile bokuthola isifo sikashukela sokukhulelwa lifaka abesifazane abengekho emaqenjini ayingozi futhi aphakeme kakhulu: ngokwesibonelo, ngokweqile okuyisisindo somzimba ngaphambi kokukhulelwa, nomlando wokubeletha osindayo (fetus enkulu, polyhydramnios, ukukhipha isisu ngokuzimele, i-gestosis, ukungalungi kwe-fetus, ukuzala kwesibeletho ) nakwabanye. Kuleli qembu, ukuhlolwa kwenziwa ngesikhathi esibucayi ukuze kuthuthukiswe isifo sikashukela sokukhulelwa - amasonto angama-24 ukuya kwengama-28 ekhulelwe (ukuhlolwa kuqala ngokuhlolwa kokuhlolwa).
Isifo sikashukela sokudla
Izimpawu kwabesifazane abakhulelwe abanohlobo loku-1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela kuncike ebangeni lesinxephezelo kanye nobude besifo futhi kunqunywa ikakhulu ngokuba khona kanye nesigaba sezinkinga ezingapheli zesifo sikashukela (i-arterial hypertension, i-retinopathy yesifo sikashukela, i-nephropathy yesifo sikashukela, i-polyneuropathy yesifo sikashukela, njll.).
Izimpawu zesifo sikashukela sokukhulelwa zincike ebangeni le-hyperglycemia. Ingazibonakalisa nge-hyperglycemia engasho lutho, i-postprandial hyperglycemia, noma isithombe sasemitholampilo sikashukela esinamazinga aphezulu we-glycemic. Ezimweni eziningi, ukubonakaliswa komtholampilo akukhona noma akunakubonwa. Njengomthetho, kukhona ukukhuluphala kwama degree ahlukahlukene, imvamisa - isisindo esisheshayo ngesikhathi sokukhulelwa. Nge-glycemia ephezulu, izikhalazo zivela nge-polyuria, ukoma, isifiso sokudla, njll. Ubunzima obukhulu bokutholwa yizimo zesifo sikashukela sokukhulelwa esinokulinganisela kwe-hyperglycemia, lapho i-glucosuria kanye ne-hyperglycemia esheshayo kungatholakali njalo.
Ezweni lethu, akukho zindlela ezijwayelekile zokutholwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa. Ngokwezincomo ezikhona, ukuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kufanele kususelwe ekunqumeni kwezinto ezingaba sengozini yokuthuthuka kwayo kanye nokusetshenziswa kwezivivinyo ezinomthwalo weglucose emaqenjini asezingeni eliphakathi neliphezulu.
Phakathi kokuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism kwabesifazane abakhulelwe, kubalulekile ukuhlukanisa:
Isifo sikashukela esasikhona kowesifazane ngaphambi kokukhulelwa (isifo sikashukela sokukhulelwa) - thayipha isifo sikashukela esingu-1, uhlobo 2 sikashukela, nezinye izinhlobo zesifo sikashukela.
I-Gestational noma isifo sikashukela esikhulelwe - noma iliphi ibanga le-carbohydrate metabolism (kusuka ekuzila ukudla ngokweqile kwe-hyperglycemia kuya kwisifo sikashukela esibonakalayo) ngokuqala nokutholwa kokuqala ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukuhlukaniswa kwesifo sikashukela sokukhulelwa
Kunesifo sikashukela sokukhulelwa, ngokuya ngendlela yokwelashwa esetshenzisiwe:
kunxephezeliswa ukwelashwa kwe-insulin.
Ngokuya ngezinga lesinxephezelo sesi sifo:
I-mellitus yesifo sikashukela esincike ku-E10 (ekuhlukanisweni kwesimanje - thayipha isifo sikashukela esingu-1)
I-mellitus yesifo sikashukela esingaxhamli ku-E11 (thayipha isifo sikashukela 2 esigabeni samanje)
I-E10 (E11) .0 - ekhubazekile
I-E10 (E11) .1 - ene-ketoacidosis
I-E10 (E11) .2 - ngomonakalo wezinso
I-E10 (E11) .3 - ngomonakalo wamehlo
I-E10 (E11) .4 - ngezinkinga zemithambo yegazi
I-E10 (E11) .5 - inezifo zokujikeleza kwe-peripheral
I-E10 (E11) .6 - nezinye izinkinga ezichaziwe
I-E10 (E11) .7 - ngezinkinga eziningi
I-E10 (E11) .8 - ngezinkinga ezingacacisiwe
I-E10 (E11) .9 - ngaphandle kwezinkinga
024.4 Isifo sikashukela sabesifazane abakhulelwe.
Ngaphezu kwesifo sikashukela sokukhulelwa, ukukhulelwa kuhlukaniswa nohlobo lwesifo sikashukela sikashukela. Ukwehlisa izinkinga eziba khona kumama nasesibelethweni, lesi sigaba seziguli kusukela ekukhulelwe kusenesikhathi sidinga isinxephezelo esiphezulu sesifo sikashukela. Kuze kube manje, iziguli ezinesifo sikashukela mellitus kufanele zilaliswe esibhedlela lapho zibona ukukhulelwa ukuze kuzinzise isifo sikashukela, kuhlolwe futhi kuqedwe izifo ezithathelwanayo ezihambisana nalokhu.Ngesikhathi sokuqala kokuphindlwa esibhedlela, kuyadingeka ukuthi kuhlolwe izitho zomchamo ukuze kutholakale isikhathi nasekwelashweni lapho kukhona i-pyelonephritis ehlangana, kanye nokuhlola umsebenzi wezinso ukuthola i-nephropathy yesifo sikashukela, unake ngokukhethekile ukuqapha ukugcwaliswa kwe-glomerular, proteinuria yansuku zonke, ne-serumineinine. Abesifazane abakhulelwe kufanele bahlolwe ngudokotela wezifo zamehlo ukuhlola isimo se-fundus kanye nokuthola i-retinopathy. Ukuba khona kwe-hypertension ye-arterial, ikakhulukazi ukukhuphuka kwengcindezi ye-diastolic ngaphezulu kuka-90 mm Hg. Ubuciko. Ukusetshenziswa kwama-diuretics kwabesifazane abakhulelwe abane-hypertension ye-arterial akuboniswa. Ngemuva kokuhlolwa, banquma ukuthi kungenzeka yini ukuthi baqhubeke nokukhulelwa. Izinkomba zokunqanyulwa kwaso isifo sikashukela i-mellitus, esenzeka ngaphambi kokukhulelwa, kungenxa yephesenti elikhulu lokushona kwabantu nokubeletha okukhona fetus, okuhambisana nesikhathi nobunzima besifo sikashukela. Ukwanda kokushona kwengane kwabesifazane abanesifo sikashukela kungenxa yokufa kokubeletha kanye ne-neonatal ngenxa yokuba khona kwesifo sokuphefumula nokwehluleka kokuzala.
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa
Ochwepheshe basekhaya nabangaphandle banikezela ngezindlela ezilandelayo zokuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa. Indlela eyodwa yokusebenzisa isinyathelo esisodwa isebenza kahle kwezomnotho kwabesifazane abasengozini enkulu yesifo sikashukela sokukhulelwa. Kuqukethe ukwenza isivivinyo sokuxilonga nge-100 g kashukela. Indlela yezinyathelo ezimbili iyanconywa eqenjini elisengozini ephakathi. Ngale ndlela, ukuhlolwa kokuhlola kuqala kwenziwa nge-50 g kashukela, futhi uma kwenzeka kwephulwa, kwenziwa isivivinyo segremu esingu-100.
Indlela yokwenza isivivinyo sokuhlunga imi kanjena: owesifazane uphuza u-50 g we-glucose encibilikisiwe ingilazi yamanzi (nganoma isiphi isikhathi, hhayi esiswini esingenalutho), kuthi ngemuva kwehora, kugaywe ushukela egazini ku-venous plasma. Uma ngemuva kwehora i-glucose ye-plasma ingaphansi kuka-7.2 mmol / L, ukuhlolwa kuthathwa njengokubi futhi ukuhlolwa kuyamiswa. (Eminye imihlahlandlela iphakamisa izinga le-glycemic le-7.8 mmol / L njengesikhombisi sokuhlolwa kwesimo sokuhlola okuhle, kepha kukhombisa ukuthi izinga le-glycemic le-7.2 mmol / L libonisa umaki ozwelayo wobungozi obukhulu besifo sikashukela sokukhulelwa.) Uma i-plasma glucose noma ngaphezu kwe-7.2 mmol / l, kuboniswa ukuhlolwa kwe-100 g glucose.
Inqubo yokuhlola ene-100 g kashukela ihlinzeka ngomthetho olandelanayo. Ukuhlolwa kwenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho, ngemuva kokuzila ukudla ebusuku amahora angama-8-14, ngokumelene nesizinda sokudla okujwayelekile (okungenani ama-150 g ama-carbohydrate ngosuku) kanye nokuzivocavoca okungenamkhawulo ngokomzimba, okungenani izinsuku ezintathu ngaphambi kocwaningo. Ngesikhathi sokuhlolwa, kufanele uhlale, ukubhema kunqatshelwe. Ngesikhathi sokuhlola, i-gouscemia ye-venous plasma inqunywa, ngemuva kwehora eli-1, amahora ama-2 namahora ama-3 ngemuva kokuzivocavoca. Ukuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kusungulwa uma amanani we-glycemic e-2 noma ngaphezulu elingana noma edlula lezi zibalo ezilandelayo: esiswini esingenalutho - i-5.3 mmol / l, ngemuva kwe-1 h - 10 mmol / l, ngemuva kwamahora ama-2 - 8.6 mmol / l, ngemuva kwamahora ama-3 - 7.8 mmol / L. Enye indlela kungaba ukusebenzisa isivivinyo esingamahora amabili ngama-75 g we-glucose (umthetho olandelwayo). Ukusungula ukuxilongwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kuleli cala, kuyadingeka ukuthi amazinga we-venous plasma glycemia encazelweni engu-2 noma ngaphezulu alingane noma adlule amanani alandelayo: ngesisu esingenalutho - 5.3 mmol / l, ngemuva kwamahora ayi-2 - 10 mmol / l, ngemuva kwamahora angama-2 - 8.6 mmol / l. Kodwa-ke, ngokusho kochwepheshe abavela kwi-American Diabetes Association, le ndlela ayinayo imvume yesampula yegalamitha eyi-100. Kusetshenziswa ukuzimisela kwesine (kwehora lesithathu) kwe-glycemia ekuhlaziyeni lapho wenza isivivinyo esine-100 g sikashukela kukuvumela ukuba uvivinye ngokuthembekile isimo se-carbohydrate metabolism kowesifazane okhulelwe.Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuqapha okujwayelekile kokuzila ukudla kwe-glycemia kwabesifazane abasengozini yesifo sikashukela sokukhulelwa kwezinye izimo akunakususa ngokuphelele isifo sikashukela sokukhulelwa, ngoba i-glycemia ejwayelekile yokuzila kwabesifazane abakhulelwe inciphise kakhulu kunabesifazane abangakhulelwe. Ngakho-ke, ukushesha kwe-standardoglycemia akufaki ubukhona be-postprandial glycemia, okuyisibonakaliso sesifo sikashukela sokukhulelwa futhi kungatholakala kuphela ngenxa yokuhlolwa kwengcindezi. Uma owesifazane okhulelwe eveza izibalo eziphakeme ze-glycemic ku-plousma ye-venous: esiswini esingenalutho esingaphezu kuka-7 mmol / l futhi kwisampula yegazi engahleliwe - ngaphezu kwe-11.1 nokuqinisekiswa kwalawa amanani ngosuku olulandelayo lokuhlolwa kokuxilongwa akudingeki, futhi kutholakala ukuthi kutholakale isifo sikashukela sokukhulelwa.
Isifo sikashukela sokukhulelwa lapho ukhulelwe
Cishe i-7% yazo zonke izisu zokukhulelwa iyinkimbinkimbi yesifo sikashukela sokukhulelwa (gestationalabetes mellitus (GDM)), esingaphezu kwezinkulungwane ezingama-200 zamacala emhlabeni ngonyaka. Kanye ne-hypertension ye-arterial kanye nokuzalwa ngaphambi kwesikhathi, i-GDM ingenye yezinkinga ezivamile zokukhulelwa.
Ukukhuluphala kwandisa ingozi yokuba nomdlavuza wesifo sikashukela womzimba ngesikhathi sokukhulelwa okungenani kabili.
Ukuhlolwa kokubekezelela ushukela kufanele kwenziwe kubo bonke abesifazane abakhulelwe emavikini angama-24- 28 wokukhulelwa.
Uma izinga likashukela we-plasma esiswini esingenalutho lidlula i-7 mmol / l, bakhuluma ngokuthuthukiswa kwesifo sikashukela esibonakalayo.
Izidakamizwa ze-Oral hypoglycemic ze-GDM ziyafakazelwa.
I-GDM ayithathwa njengophawu lwesigaba se-Caesarean esihleliwe, futhi kakhulu ngokulethwa ngaphambi kwesikhathi.
I-pathophysiology yemiphumela yesifo sikashukela sokukhulelwa kanye nomphumela ku-fetus
Ukusukela ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa, i-fetus ne-placenta yokwakha zidinga inani elikhulu le-glucose, elihlinzekwa ngokuqhubekayo kumntwana osesibelethweni besebenzisa amaprotheni e-transporter. Kulokhu, ukusetshenziswa kwe-glucose ngesikhathi sokukhulelwa kushesha kakhulu, okusiza ukunciphisa izinga layo egazini. Abesifazane abakhulelwe bathambekele ekukhuliseni i-hypoglycemia phakathi kokudla nangesikhathi sokulala, njengoba umntwana ezothola ushukela ngaso sonke isikhathi.
Yini ingozi yesifo sikashukela sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa kwengane nonina:
Lapho ukukhulelwa kuqhubeka, ukuzwela kwezicubu ukungena kwe-insulin kuncipha ngokuqinile, futhi ukugcwala kwe-insulin kukhulisa ukuncindezela. Kulokhu, izinga eliphansi le-insulin (esiswini esingenalutho) liyakhuphuka, kanye nokugcwala kwe-insulin okuvuselelwa kusetshenziswa isivivinyo sokubekezelela i-glucose (isigaba sokuqala nesesibili sokuphendula kwe-insulin). Ngokukhula kweminyaka yokuthinta, ukuqedwa kwe-insulin egazini nakho kuyakhuphuka.
Ngokukhiqizwa kwe-insulin okunganele, abesifazane abakhulelwe bahlakulela i-mellitus yesifo sikashukela somzimba, esibonakaliswa ngokwanda kwe-insulin. Ngaphezu kwalokho, ukwanda kwe-proinsulin egazini kuwuphawu lwe-GDM, okubonisa ukuwohloka ekusebenzeni kwamaseli we-pancreatic beta.
Ukuxilongwa kwe-mestitus yesifo sikashukela sokukhulelwa: izinkomba nokujwayelekile
Ngo-2012, ochwepheshe abavela kwi-Russian Association of Endocrinologists kanye nochwepheshe abavela kwiRussian Association of Obstetricians and Gynecologists bamukele iRussian National Consensus "Gestational Diabetes: Diagnosis, Treatment, Postpartum Monitoring" (kamuva okubhekiselwe kuyo njengeRussia National Consensus). Ngokwalo mbhalo, i-GDS ikhonjwa indlela elandelayo:
Ekwelashweni kokuqala kwabakhulelwe
ushukela we-plasma glucose, noma
i-glycated hemoglobin (inqubo eqinisekisiwe ngokuya nge-National Glycohemoglobin Standartization Program NGSP futhi yafaniswa ngokwamanani wesethenjwa amukelwe ku-DCCT - Isifo Sikashukela Sesifo Sikashukela), noma
ushukela we-plasma nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma ngabe ukudla kungakanani.
Ngesonto lama-24 ukuya kwelama-28 lokukhulelwa
Bonke abesifazane abakhulelwe, kubandakanya nalabo ababanga nokulimazeka emzimbeni we-carbohydrate metabolism ekuqaleni, banikezwa ukuhlolwa kokubekezelela i-glucose (PHGT) emavikini angama-24 ukuya kwangama-28 kokukhulelwa.Isikhathi esifanele singamaviki angama-24-26, kepha i-HRTT ingenziwa amasonto angama-32 wokukhulelwa.
Emazweni ahlukahlukene, i-PGTT yenziwa ngemithwalo ye-glucose ehlukile. Ukuhunyushwa kwemiphumela kungahluka futhi kancane.
E-Russia, i-PGTT yenziwa ngo-75 g we-glucose, kanti e-USA nakwamanye amazwe amaningi e-EU, isivivinyo esine-100 g kashukela sithathwa njengesiqhelo sokuxilonga. I-American Diabetes Association iqinisekisa ukuthi zombili izinhlobo zokuqala nezesibili ze-PHTT zinenani elifanayo lokuxilonga.
Ukuhunyushwa kwe-PGTT kungenziwa ngabasebenza nge-endocrinologists, abezokubelethisa-abagxila bezinyanga kanye nabelaphi. Uma umphumela wokuhlola ukhombisa ukukhula kwesifo sikashukela esibonakalayo, owesifazane okhulelwe ngokushesha uthunyelwa ku-endocrinologist.
Ukuphathwa kweziguli ezine-GDM
Emavikini angama-1-2 ngemuva kokuxilongwa, isiguli sikhonjiswa ukuqashelwa ngabezokubeletha, abelaphi, odokotela abajwayelekile.
Ukuhlolwa kwenziwa ngemuva kwesizinda sokudla okujwayelekile. Okungenani izinsuku ezintathu ngaphambi kokuhlolwa, okungenani i-150 g yama-carbohydrate kufanele ilethwe ngosuku.
Ukudla kokugcina ngaphambi kocwaningo kufanele okungenani kube nama-30-50 g wama-carbohydrate.
Ukuhlolwa kwenziwa esiswini esingenalutho (amahora angama-8-14 ngemuva kokudla).
Ukuphuza amanzi ngaphambi kokuhlaziywa akuvunyelwe.
Ngesikhathi sokufunda, awukwazi ukubhema.
Ngesikhathi sokuhlolwa, isiguli kufanele sihlale.
Uma kungenzeka, ngosuku olwedlule nangesikhathi sokufunda, kuyadingeka ukukhipha ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezingaguqula izinga le-glucose egazini. Lokhu kufaka phakathi ama-multivitamini kanye namalungiselelo we-iron, afaka ama-carbohydrate, kanye nama-corticosteroids, ama-beta-blockers, ama-agonists we-beta-adrenergic.
nge-toxicosis yokuqala yabesifazane abakhulelwe,
uma kunesidingo sokuphumula kombhede okuqinile,
ngesizinda sesifo esibuhlungu sokuvuvukala,
ngokwanda kwe-pancreatitis engapheli noma i-resected syndrome yesisu.
Iziphakamiso zowesifazane okhulelwe one-GDS esembuliwe ngokwesivumelwano selizwe laseRussia:
Ukulungiswa kokudla komuntu ngamunye ngokuya ngesisindo somzimba nokuphakama kowesifazane. Kunconywa ukuba ususe ngokuphelele ama-carbohydrate agaya kalula futhi unciphise inani lamafutha. Ukudla kufanele kusatshalaliswe ngokulinganayo ezindaweni ezingama-4-6. Ama-sweeteners angenampilo angasetshenziswa ngokuhlolisisa.
Kwabesifazane abane-BMI> 30 kg / m2, isilinganiso samakhalori wansuku zonke kufanele sehliswe ngo-30- 33% (cishe ama-25 kcal / kg ngosuku). Kuyafakazelwa ukuthi isilinganiso esinjalo singehlisa i-hyperglycemia ne-plasma triglycerides.
Ukuzivocavoca i-aerobic: ukuhamba imizuzu okungenani engu-150 ngesonto, ukubhukuda.
Ukuziqapha kwezinkomba ezibalulekile:
ukudla ushukela egazini eliyisihluthulelo, ngaphambi kokudla nehora eli-1 ngemuva kokudla,
Izinga le-ketone imizimba yomchamo ekuseni esiswini esingenalutho (ngaphambi kokulala noma ebusuku, kunconywa ukuthi ngaphezu kwalokho uthathe ama-carbohydrate ngesilinganiso esingaba ngu-15 g we-ketonuria noma i-ketonemia),
Ngaphezu kwalokho, isiguli sinconywa ukugcina idayari yokuzihlola kanye nedayari yokudla.
Izinkomba zokwelashwa kwe-insulin, izincomo zokuvumelana kwezwe laseRussia
Ukungakwazi ukufezekisa ileveli kashukela kashukela
Izimpawu ze-fetopathy yesifo sikashukela nge-ultrasound (ubufakazi obuqondile be-hyperglycemia engapheli)
Izimpawu ze-Ultrasound ze-fetus diabetesic fetopathy:
isithelo esikhulu (ubukhulu besisu sikhulu kune- noma silingana ne-75 percentile),
i-cardiomegaly kanye / noma i-cardiopathy,
ukuvuvukala nokuqina kwesithako samafutha angaphansi,
ukuqina kwesibaya somlomo wesibeletho,
owokuqala otholakele noma okhulayo we-polyhydramnios ngokuxilongwa okutholakele kwe-GDM (uma kunezinye izizathu ngaphandle).
Lapho enquma ukwelashwa kwe-insulin, owesifazane okhulelwe uholwa ngokuhlangana nodokotela oyi-endocrinologist (udokotela wezokwelapha) nodokotela obambele inzalo.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe: ukukhethwa kwe-pharmacotherapy
Izidakamizwa ze-Oral hypoglycemic ngesikhathi sokukhulelwa kanye nokukhishwa komzimba ziyaphikisana!
Yonke imikhiqizo ye-insulin ihlukaniswe ngamaqembu amabili ngokuya ngeziphakamiso ze-American Food and Drug Administration (FDA).
isigaba B (imiphumela engemihle ku-fetus ayitholakalanga ezifundweni zezilwane, izifundo ezenele futhi ezilawulwa kahle kwabesifazane abakhulelwe bezingenziwa),
isigaba C (imiphumela engemihle ku-fetus ikhonjwe ezifundweni zezilwane, ucwaningo kwabesifazane abakhulelwe alwenziwe).
Ngokuhambisana nezincomo zesivumelwano selizwe laseRussia:
konke ukulungiselela kwe-insulin kwabesifazane abakhulelwe kufanele kunqunywe ngenkomba ebalulekile yegama lokuhweba,
ukulaliswa esibhedlela ukuze kutholakale i-GDM akudingekile futhi kuya ngobukhona bezinkinga zokuthintela,
I-GDM ayithathwa njengophawu lwesigaba se-Caesarean esihleliwe noma ukulethwa kwangaphambi kwesikhathi.
Isifo sikashukela mellitus (isifo sikashukela) Ingabe iqembu lezifo (ze-metabolic) zezifo ezibonakaliswa yi-hyperglycemia engapheli, okuwumphumela wokuvikelwa kwe-insulin, imiphumela ye-insulin, noma zombili lezi zici. I-hyperglycemia yesifo sikashukela ihambisana nomonakalo, ukungasebenzi kahle kanye nokungakwaneli kwezitho ezahlukahlukene, ikakhulukazi amehlo, izinso, izinzwa, inhliziyo nemithambo yegazi (WHO, 1999, 2006 ngezengezo) 1, 2, 3.
I-mestitus ye-Gestationalabetes mellitus (GDM) - Lesi yisifo esibonakaliswa yi-hyperglycemia, esitholwa okokuqala ngesikhathi sokukhulelwa, kepha asihlangabezani nenqubo yesifo sikashukela 2, 5. GDM ukwephula ukubekezelela i-glucose ukwehlukahluka kobunzima, okuvela noma okutholwe okokuqala ngesikhathi sokukhulelwa.
Igama Lephrothokholi: Isifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa
Amakhodi (amakhodi) ngokuya nge-ICD-10:
E 10 Isifo sikashukela esincike ku-insulin
E 11 I-mellitus yesifo sikashukela esinga-insulin
Isifo sikashukela se-O24 sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa
I-O24.0 I-preexisting i-mellitus ethembele ku-insulin
I-O24.1 I-preexisting yesifo sikashukela i-mellitus engaxhomekeki ku-insulin
I-O24.3 i-preexisting sikashukela mellitus, ayichaziwe
O24.4 Isifo sikashukela mellitus ngesikhathi sokukhulelwa
I-O24.9 Isifo sikashukela i-mellitus ekukhulelweni, ayichaziwe
Izifinyezo ezisetshenziswe kuphrothokholi:
I-AH - i-hypertension ye-arterial
HELL - umfutho wegazi
I-GDM - isifo sikashukela sokukhulelwa
I-DKA - isifo sikashukela sikashukela
IIT - I-Insulin Therapy eqinisiwe
IR - ukumelana ne-insulin
I-IRI - i-insulin engasebenzi
I-BMI - inkomba yesisindo somzimba
I-UIA - i-microalbuminuria
I-NTG - ukubekezelela ushukela okhubazekile
I-NGN - i-glycemia engasebenzi kahle
I-NMH - ukuqapha okuqhubekayo koshukela
I-NPII - ukufakwa ngokuqhubekayo kwe-insulin (insulin pump)
I-PGTT - ukuhlolwa kokubekezelela ushukela omlomo
PSD - pre-gestational sikashukela mellitus
Uhlobo 2 sikashukela - thayipha isifo sikashukela esingu-2
Thayipha isifo sikashukela esingu-1 - thayipha ushukela ongu-1
I-SST - ukwelashwa okwehlisa ushukela
I-FA - umsebenzi womzimba
I-XE - amayunithi esinkwa
I-HbAlc - i-glycosylated (glycated) hemoglobin
Usuku Lokuthuthukiswa Kwesivumelwano: Unyaka ka-2014.
Isigaba seziguli: abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela mellitus (DM) uhlobo 1 no-2, abane-GDM.
Abasebenzisi be-Protocol: odokotela be-endocrinologists, odokotela abajwayelekile, abelaphi, odokotela ababelekela ngokuhlinzwa, odokotela bezimo eziphuthumayo.
Ithebula 7 Ukuxilongwa okuhlukile kwesifo sikashukela kwabesifazane abakhulelwe
Isifo sikashukela esithandekayo Isifo sikashukela esibonakalayo ngesikhathi sokukhulelwa I-GDM (Isithasiselo 6)
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela kusungulwa ngaphambi kokukhulelwa Ikhonjwe ngesikhathi sokukhulelwa Ikhonjwe ngesikhathi sokukhulelwa
IVenous plasma glucose kanye neHbA1c yokuxilongwa kwesifo sikashukela
Ukufinyelela Izinjongo Ijubane le-glucose ≥7.0 mmol / L HbA1c ≥6.5%
I-glucose, kungakhathalekile isikhathi sosuku ≥11.1 mmol / l Ukuzila ushukela ≥5.1
Ngaphambi kokukhulelwa Kunoma yimuphi unyaka wokukhulelwa Emavikini angama-24-28 ekhulelwe
Akuqhutshwa Kwenziwa ekwelashweni kokuqala kowesifazane okhulelwe osengozini Kwenziwa amasonto angama-24-28 kubo bonke abesifazane abakhulelwe ababanga nokwephulwa kwe-carbohydrate metabolism lapho bekhulelwe ekuqaleni
I-insulinotera pium ngokujovwa kaninginingi kwe-insulin noma ukumiliselwa okuqhubekayo kwe-subcutaneous (pomp) Ukwelashwa kwe-insulin noma ukwelashwa kokudla (nge-T2DM) Ukwelashwa kokudla, uma kunesidingo i-insulin therapy
Ukubonisana kwamahhala ekwelashweni phesheya! Shiya isicelo ngezansi
Thola izeluleko zezokwelashwa
Umgomo wokwelapha isifo sikashukela kubantu besifazane abakhulelwe ukuthola i-standardoglycemia, ukuguqula umfutho wegazi, ukuvimbela izinkinga zesifo sikashukela, ukunciphisa ubunzima bokukhulelwa, ukuzala kwengane nesikhathi sokubeletha, nokwenza ngcono imiphumela ye-perinatal.
Ithebula 8 Amanani okuhlosiwe wama-carbohydrate ngesikhathi sokukhulelwa 2, 5
Isikhathi sokutadisha I-Glycemia
Esiswini esingenalutho / ngaphambi kokudla / ngesikhathi sokulala / 03,00 kufika ku-5.1 mmol / l
Ihora eli-1 ngemuva kokudla kufika ku-7.0 mmol / l
Imizimba ye-urone ketone cha
Amaqhinga okwelapha 2, 5, 11, 12:
• Ukwelashwa kokudla,
• umsebenzi womzimba,
• ukuqeqeshwa kanye nokuzithiba,
• izidakamizwa ezinciphisa ushukela.
Ngesifo sikashukela sohlobo 1, kunconywa ukudla okulingene: ukondliwa okunama-carbohydrate anele ukuvimbela ukuthi kungabulawa yindlala.
Nge-GDM kanye nesifo sikashukela sohlobo 2, ukwelashwa kokudla kwenziwa ngaphandle kwama-carbohydrate agaya kalula kanye nokuvinjelwa kwamafutha, ukusatshalaliswa ngokulinganayo kwenani lokudla lansuku zonke kwama-4-6 receptions. Ama-carbohydrate anokuqukethwe okuphezulu kwefiber fiber yokudla akufanele ibe ngaphezulu kwe-38-45% yokudla kwekhalori yansuku zonke, amaprotheni - 20-25% (1,3 g / kg), amafutha - aze afike ku-30%. Abesifazane abane-BMI ejwayelekile (18-25 kg / m2) banconywa ukuthi kuthathwe amakhalori angama-30 kcal / kg nsuku zonke, ngokweqile (BMI 25-30 kg / m2) 25 kcal / kg, kanye nokukhuluphala ngokweqile (BMI kg30 kg / m2) - 12-15 kcal / kg.
Ngesifo sikashukela kanye ne-GDM, ukuvivinya umzimba okwenziwe nge-aerobic kunconywa ngendlela yokuhamba okungenani imizuzu eyi-150 ngesonto, ukubhukuda echibini, ukuzihlola kwenziwa yisiguli, imiphumela inikezwa udokotela. Kuyadingeka ukugwema izivivinyo ezingadala ukwanda komfutho wegazi kanye ne-uterine hypertonicity.
Imfundo yesineke nokuzithiba
• Izifundo zeziguli kufanele zinikeze iziguli ulwazi namakhono afanelekile ekufezekiseni izinhloso ezithile zokwelapha.
• Abesifazane abahlela ukukhulelwa nabesifazane abakhulelwe abangaqeqeshiwe (umjikelezo oyinhloko), noma iziguli eseziqeqeshiwe (zemijikelezo ephindaphindwayo) bathunyelwa esikoleni sikashukela ukuze balondoloze ulwazi lwabo kanye nesisusa sabo noma lapho kuvela izinhloso ezintsha zokwelapha, badlulisela ekwelashweni kwe-insulin.
Ukuzithibal kufaka phakathi ukucaciswa kwe-glycemia isebenzisa amadivayisi aphathekayo (ama-glucometer) esiswini esingenalutho, ngaphambi nangehora eli-1 ngemuva kokudla okuyinhloko, i-ketonuria noma i-ketonemia ekuseni ngesisu esingenalutho, umfutho wegazi, ukunyakaza kwengane, isisindo somzimba, ukugcina idayari yokuziqapha kanye nedayari yokudla.
Uhlelo lwe-NMG isetshenziswa njengokwengeza kokuziqapha kwendabuko esimweni se-hypentlyogemcent ye-latent noma ngeziqephu ze-hypoglycemic ezivamile (Isithasiselo 3).
Ukwelashwa kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela
• Uma kwenzeka ukhulelwe ngokusebenzisa i-metformin, glibenclamide, ukwelula isikhathi sokukhulelwa kungenzeka. Zonke ezinye izidakamizwa ezinciphisa ushukela kufanele zimiswe ngaphambi kokukhulelwa futhi zifakwe i-insulin.
• Kusetshenziswa kuphela ama-insulin ama-insulin amafushane futhi aphakathi nendawo asetshenziswa, ama-insulin anemininingwane emincane futhi emide esebenza isikhathi eside, evunyelwe ngaphansi kwesigaba B
Ithebula 9 Izidakamizwa ezikhulelwe ze-insulin (Uhlu B)
Ukulungiselela i-insulin Indlela yokuphatha
Ngokwezakhi zofuzo ezifakwe ngabantu izakhi zofuzo Isirinji, isirinji, iphampu
Isirinji, isirinji, iphampu
Izakhi zemvelo insulin yomuntu wesikhathi esiphakathi Isirinji
I-Ultrashort Insulin Analogs Isirinji, isirinji, iphampu
Ukusebenza isikhathi eside kwe-insulin Isirinji
• Ngesikhathi sokukhulelwa, kwenqatshelwe ukusebenzisa amalungiselelo e-biosimilar insulin angakayi inqubo ephelele yokubhaliswa kwezidakamizwa kanye nokubhaliswa kwangaphambili. izivivinyo zemitholampilo kwabesifazane abakhulelwe.
• Wonke amalungiselelo e-insulin kufanele abhekelwe abesifazane abakhulelwe abanesibopho esiyisibopho segama lokungafanele kwezwe kanye igama lokuhweba.
Izindlela ezingcono kakhulu zokusebenzisa i-insulin ngamaphampu we-insulin ngokuqapha okuqhubekayo kweglucose.
• Isidingo sansuku zonke se-insulin engxenyeni yesibili yokukhulelwa singakhula ngokumangazayo, kuze kube izikhathi ezingama-2-3, uma siqhathaniswa nesidingo sokuqala ngaphambi kokukhulelwa.
• I-Folic acid 500 mcg ngosuku kuze kube yisonto le-12, kubandakanywa, i-potassium iodide 250 mcg ngosuku ekukhulelweni konke - lapho kungekho khona ukungqubuzana.
• Ukwelashwa ngama-antibiotic okuthola izifo ezithinta umchamo (ama-penicillin ku-trimester yokuqala, ama-penicillin noma ama-cephalosporins ku-II noma i-III trimesters).
Izici zokwelashwa kwe-insulin kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sohlobo 1 8, 9
Amaviki awu-12 okuqala kwabesifazane, thayipha isifo sikashukela esingu-1 ngenxa yomphumela we- "hypoglycemic" (okusho ukuthi, ngenxa yokushintshwa koshukela usuka egazini likamama uye egazini le-fetus) kuhambisana "nokwenza ngcono" ngesikhathi sesifo sikashukela, isidingo sokusetshenziswa kwe-insulin nsuku zonke, esingavela njengezimo ze-hypoglycemic Isimo seSomoji kanye nokubola okulandelayo.
Abesifazane abanesifo sikashukela ekwelashweni kwe-insulin kufanele baxwayiswe ngengozi eyandayo ye-hypoglycemia nokwaziwa kwayo ngesikhathi sokukhulelwa, ikakhulukazi ku-trimester yokuqala. Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sohlobo 1 kufanele bahlinzekwe ngezinqolobane ze-glucagon.
Kusukela ngesonto 13 I-hyperglycemia ne-glucosuria inyuka, isidingo se-insulin sikhuphuka (ngokwesilinganiso ngamaphesenti angama-30-100 ezinga langaphambi kokumiswa komzimba) kanye nengozi ye-ketoacidosis, ikakhulukazi esikhathini samaviki angama-28- 30. Lokhu kungenxa yomsebenzi omkhulu we-hormonal we-placenta, okhiqiza ama-contrainsular agents njengama-chorionic somatomammatropin, progesterone, estrogens.
Ukweqisa kwabo kuholela ku-:
• ukumelana ne-insulin,
• ukwehla kokuzwela komzimba wesiguli ku-zcogenic insulin,
• ukukhulisa isidingo somuthi we-insulin nsuku zonke,
• Isisho esidume ngokuthi "ekuseni kokusa" ngokwenyuka okukhulu kwe-glucose ekuseni kakhulu.
Nge-hyperglycemia yasekuseni, ukukhuphuka komthamo wakusihlwa we-insulin ende awufiseleki, ngenxa yengozi enkulu ye-hypoglycemia yangebusuku. Ngakho-ke, kulaba besifazane abane-hyperglycemia yasekuseni, kunconywa ukuphatha umthamo wasekuseni we-insulin isikhathi eside nomthamo owengeziwe wesenzo esifushane / se-ultra-esifushane se-insulin noma sokudlulisela ukupompela i-insulin.
Izici zokwelashwa kwe-insulin ngesikhathi sokuvimbela ukuphefumula kokuxineka kwe-fetus: lapho kunquma i-dexamethasone 6 mg izikhathi ezi-2 ngosuku ngezinsuku ezi-2, umthamo we-insulin enwetshiwe uphindaphindeka kabili esikhathini sokuphathwa kwe-dexamethasone. Ukulawulwa kwe-Glycemia kuchazwe ngo-06,00, ngaphambi nangemva kokudla, ngaphambi kokulala nango-03.00. ngokulungiswa kwamthamo we-insulin emfushane. Ukulungiswa kwe-metabolic kasawoti wamanzi.
Ngemuva kwamasonto angama-37 Ngokukhulelwa, isidingo se-insulin singase sehlise futhi, okuholela ekunciphiseni okuphakathi kumithamo ye-insulin yamayunithi ama-4-8 / ngosuku. Kukholelwa ukuthi umsebenzi we-insulin wokuhlanganisa we-β cell apparatus we-pancreas we-fetus kuleli qophelo uphezulu kangangokuba unikeza ukusetshenziswa okubalulekile kwe-glucose egazini likamama. Ngokuncipha okubukhali kwe-glycemia, kuyathandeka ukuqinisa ukulawula isimo se-fetus maqondana nokuvinjezelwa okungenzeka kwe-pheoplacental tata ngokumelene nesizinda sokungapheleli kwe-placental.
Ekubelethweni kwengane ukuguquguquka okukhulu kwamazinga kashukela egazini kwenzeka, i-hyperglycemia ne-acidosis kungakhula ngaphansi kwethonya lemizwa noma i-hypoglycemia, ngenxa yomsebenzi owenziwe ngokomzimba, ukukhathala kowesifazane.
Ngemuva kokubeletha ushukela wegazi wehla ngokushesha (ngokumelene nesizinda sokwehla kwezinga lama-placental hormone ngemuva kokuzalwa). Ngesikhathi esifanayo, isidingo se-insulin isikhathi esifushane (izinsuku ezingama-2-4) siba ngaphansi kunangaphambili kokukhulelwa. Bese kuthi kancane kancane ushukela wegazi ukhuphuke.Ngosuku lwe-7 ukuya ku-21 esikhathini sokubeletha, ifinyelela ezingeni elibonwe ngaphambi kokukhulelwa.
I-toxicosis yokuqala yabesifazane abakhulelwe abane-ketoacidosis
Abesifazane abakhulelwe badinga ukuvuselelwa kwamanzi emzimbeni ngezisombululo ze-saline ngevolumu engu-1.5-2,5 l / ngosuku, kanye nangomlomo ngo-2-4 l / ngosuku ngamanzi angenawo igesi (kancane, emashumeni amancane). Ekudleni kowesifazane okhulelwe kuyo yonke inkathi yokwelashwa, kunconywa ukudla okugcotshisiwe, ikakhulukazi i-carbohydrate (okusanhlamvu, iziphuzo, ujeli), ukufaka usawoti okwengeziwe, ngaphandle kwamafutha abonakalayo. Nge-glycemia engaphansi kuka-14,0 mmol / L, i-insulin ilawulwa ngokumelene nesizinda sesisombululo se-5% kashukela.
Ukuphathwa kokuzalwa 8, 9
Ukulaliswa esibhedlela okuhleliwe:
• isikhathi esifanele sokulethwa ngamaviki angama-38 ukuya kuma-40,
• Indlela efanelekile yokulethwa - ukubeletha ingane ngomsele wokuzalwa wemvelo ngokuqapha okuseduze kwe-glycemia ngesikhathi (ngehora) nangemva kokubeletha.
Izinkomba zesigaba se-cesarean:
• izinkomba zokuvinjwa kokulethwa kokusebenza (okuhleliwe / okuphuthumayo),
• ukuba khona kwezinkinga ezinzima zesifo sikashukela noma esiqhubekayo.
Isikhathi sokulethwa kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sinqunywa ngokuhlukile, kucatshangelwa ubunzima besifo, ubungako besinxephezelo, isimo esisebenzayo se-fetus kanye nokuba khona kwezinkinga zokubeletha.
Lapho uhlela ukuzalwa kwezingane ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo loku-1, kuyadingeka ukuhlola izinga lokuvuthwa kwengane, ngoba ukuvuthwa sekwephuzile kwezinhlelo zayo ezisebenzayo kungenzeka.
Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela kanye ne-fetus macrosomia kufanele baziswe ngobungozi obukhona bezinkinga zokubeletha obujwayelekile besitho sangasese sowesifazane, ekuzalweni kokubeletha kanye nasengxenyeni ye-cesarean.
Nganoma yiluphi uhlobo lwe-fetopathy, amazinga e-glucose angazinzi, ukuqhubekela phambili kwezinkinga zesifo sikashukela sekwedlule isikhathi, ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe beqembu "eliphakeme kakhulu lezinkinga", kubalulekile ukuxazulula inkinga yokulethwa kusenesikhathi.
Ukulethwa ukwelashwa kwe-insulin 8, 9
Ngokuzalwa kwengane yemvelo:
• amazinga we-glycemia kufanele agcinwe phakathi kwe-4.0-7.0 mmol / L. Qhubeka nokuphathwa kwe-insulin enwetshiwe.
• Uma kudliwa ngesikhathi sokubeletha, ukuphathwa kwe-insulin emfushane kufanele kumboze inani le-XE elichithwayo (Isithasiselo 5).
• Ukulawulwa kwe-glycemic njalo emahoreni ama-2.
• Nge-glycemia engaphansi kuka-3.5 mmol / L, ukuphathwa kwe-intravenous kwesisombululo se-5% kashukela ka-200 ml kukhonjisiwe. Nge-glycemia engaphansi kwe-5.0 mmol / L, i-10 g ye-glucose eyengeziwe (chaza ku-patity yomlomo). Nge-glycemia enkulu kune-8.0-9.0 mmol / L, umjovo we-intramuscular weyunithi eli-1 le-insulin elula, kumayunithi ayi-10,0.0.0 mmol / L 2, kumayunithi ayi-13.0-15.0 mmol / L -3. , nge-glycemia engaphezu kwama-16.0 mmol / l - amayunithi ama-4.
• Ngezimpawu zokuphelelwa ngamandla, ukuphathwa kwe-saline okufakwa emzimbeni
• Kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sohlobo 2 abanesidingo esiphansi se-insulin (ukuya kuma-unit ayi-14 / ngosuku), i-insulin ayidingeki ngesikhathi sokubeletha.
• ngosuku lokuhlinzwa, kuthathwa umthamo wasekuseni we-insulin enwetshiwe (nge-standardoglycemia, umthamo wehliswa ngo-10-20%, nge-hyperglycemia, umthamo we-insulin enwetshiwe uphathwa ngaphandle kokulungiswa, kanye neyunithi eyengeziwe ye-insulin eyi-insulin.
• esimweni sokusetshenziswa kwe-anesthesia ejwayelekile ngesikhathi sokubeletha kwabesifazane abanesifo sikashukela, ukuqapha okujwayelekile kwamazinga kashukela (njalo ngemizuzu engama-30) kufanele kwenziwe kusukela esikhathini sokufakwa kuze kuzalwe umntwana osesibelethweni nowesifazane ngokuphelele.
• Amanye amaqhinga we-hypoglycemic therapy afana nalawo wokulethwa kwemvelo.
• Ngosuku lwesibili ngemuva kokuhlinzwa, ngokudla okulinganiselwe, umthamo we-insulin enwetshiwe wehliswa ngu-50% (ikakhulukazi ophethwe ekuseni) kanye nama-insulin 2-4 amafushane amayunithi ngaphambi kokudla ne-glycemia engaphezu kwe-6.0 mmol / L.
Izici zokuphathwa kwabasebenzi kushukela
• Ukulawulwa okuqhubekayo kwentliziyo,
• Ukukhululeka ngokuphelele kobuhlungu.
Ukuphathwa kwesikhathi sokubeletha kushukela
Kwabesifazane abanesifo sikashukela sohlobo loku-1 ngemuva kokubeletha kanye nokuqala kokuqunjelwa, umthamo we-insulin isikhathi eside ungancishiswa ngo-80-90%, umthamo we-insulin omfushane awudluli amayunithi angama-2-4 ngaphambi kokudla ngokuya nge-glycemia (isikhathi sezinsuku ezingama-1-3 ngemuva kokubeletha). Kancane kancane, kungakapheli amasonto ayi-1-3, isidingo sokunyuka kwe-insulin kanye nethamo le-insulin lifinyelela izinga langaphambi kokukhulelwa. Ngakho-ke:
• Vumelanisa umthamo we-insulin, ucabanga ukwehla okusheshayo kwesidingo esivele osukwini lokuqala emva kokuzalwa kusukela ngesikhathi sokuzalwa kwe-placenta (ngo-50% noma ngaphezulu, ebuyela kumthamo wokuqala ngaphambi kokukhulelwa),
• ncoma ukuncelisa ibele (uxwayise ngokuthuthuka okungenzeka kwe-hypoglycemia kumama!),
• Ukuvimbela inzalo okusebenzayo okungenani iminyaka eyi-1.5.
Izinzuzo zokwelashwa kwepampu insulin kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela
• Abesifazane abasebenzisa ama-NPIs (iphampu ye-insulin) maningi amathuba okufinyelela amazinga abo we-HbAlc. Izinkomba zaselebhu Imvamisa yokuhlola
Ukuzithiba kwe-Glycemic Okungenani izikhathi ezine nsuku zonke
I-Hbalc Isikhathi esingu-1 ezinyangeni ezi-3
Ukuhlolwa kwegazi kwe-biochemical (inani eliphelele lamaprotheni, i-bilirubin, i-AST, i-ALT, i-creatinine, ukubalwa kwe-GFR, i-electrolyte K, Na,) Kanye ngonyaka (lapho kungekho zinguquko)
Isibalo segazi esiphelele Kanye ngonyaka
I-Urinalysis Kanye ngonyaka
Ukuzimisela kumchamo wesilinganiso se-albhamuin ku-creatinine Isikhathi 1 ngonyaka emva kweminyaka engu-5 kusukela ngesikhathi sokuxilongwa kwesifo sikashukela sohlobo 1
Ukunqunywa kwezidumbu ze-ketone emchameni nasegazini Ngokwezinkomba
* Uma kunezimpawu zokuphazamiseka okungapheli kwesifo sikashukela, ukungezelelwa kwezifo ezihambisanayo, ukubukeka kwezinto ezengeziwe zobungozi, umbuzo wokuvama kwezivivinyo unqunywa ngamunye.
Ithebula 16 Uhlu lwezivivinyo ezinamandla ezidingekayo zokulawula okunamandla ezigulini ezinesifo sikashukela mellitus * 3, 7
Ukuhlolwa kwensimbi Imvamisa yokuhlola
Ukuqapha Okuqhubekayo Kwe-Glucose (LMWH) Isikhathi esingu-1 ngekota, ngokuya izinkomba - kaningi
Ukulawulwa kwengcindezi yegazi Kukho konke ukuvakashela udokotela
Ukuhlolwa kwezinyawo nokuhlolwa kokuzwela kwezinyawo Kukho konke ukuvakashela udokotela
I-neuromyography ephansi yomlenze Kanye ngonyaka
ECG Kanye ngonyaka
Ukuhlolwa kwemishini nokuhlolwa kwezindawo zokujova Kukho konke ukuvakashela udokotela
Isifuba x-ray Kanye ngonyaka
I-Ultrasound yemikhumbi yamaphethelo aphansi nezinso Kanye ngonyaka
I-Ultrasound yesibeletho sesisu Kanye ngonyaka
• Emavikini la-6-12 ngemuva kwekutalwa bonke abesifazane abane-GDM bathola i-PGTT enama-75 g kashukela ukufaka kabusha izinga le-carbohydrate metabolism (Isithasiselo 2),
• Kuyadingeka ukwazisa izingane kanye nama-GPs ngesidingo sokuqapha isimo se-carbohydrate metabolism kanye nokuvinjwa kwesifo sikashukela sohlobo lwengane enganeni eye yathola i-GDM (Isithasiselo 6).
Izinkomba zokuphumelela kokulashwa kanye nokuphepha kwezindlela zokuxilonga nezokwelashwa ezichazwe kuphrothokholi:
• ukufinyelelwa kwezinga le-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism eduze nokujwayelekile ngangokunokwenzeka, ukujwayelekile kokucindezela kwegazi kowesifazane okhulelwe,
• ukuthuthukiswa kwesisusa sokuzithiba,
• Ukuvimbela izinkinga ezithile zikashukela,
• ukungabi bikho kwezinkinga ngesikhathi sokukhulelwa nokubeletha, ukuzalwa kwengane ephelele yesikhathi esigcwele.
Ithebula 17 Target glycemia kwiziguli ezine-GDM 2, 5
Isikhombi (ushukela) Izinga lethagethi (umphumela weplasma ulinganiswe)
Izinkomba zokulaliswa esibhedlela kweziguli ezine-PSD 1, 4 *
Izinkomba zokulaliswa esibhedlela esiphuthumayo:
- ukudakwa kwesifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa,
- I-hyper / hypoglycemic precoma / coma
- I-ketoacidotic precoma ne-coma,
-ukuqhubeka kwezinkinga zamathambo zesifo sikashukela (i-retinopathy, nephropathy),
- ukutheleleka, ukudakwa,
- ukujoyina izinkinga zokuvimbela inzalo ezidinga izindlela eziphuthumayo.
Izinkomba zokulaliswa esibhedlela okuhleliwe*:
- Bonke abesifazane abakhulelwe bangeniswa esibhedlela uma benesifo sikashukela.
- Abesifazane abanesifo sikashukela sangaphambi kokumiswa komzimba bangeniswa esibhedlela njengoba kuhlelwe kulezi zikhathi ezilandelayo zokukhulelwa:
Ukulaliswa esibhedlela okokuqala Kwenziwa ukukhulelwa kuze kube amasonto ayi-12 esibhedlela i-endocrinological / prapeutic profile mayelana nokwehla kwesidingo se-insulin kanye nengozi yezimo ze-hypoglycemic.
Inhloso yokulaliswa esibhedlela:
- ukuxazulula inkinga yokuthi kungenzeka ukuthi kwandiswe isikhathi sokukhulelwa,
-ukukhonjwa nokulungiswa kwezinkinga ze-metabolic kanye ne-microcirculatory zesifo sikashukela kanye ne -exgenitant psychology, ukuqeqeshwa eSikoleni Sikashukela (ngesikhathi sokukhulelwa).
Ukulaliswa kwesibili esibhedlela esikhathini esingamaviki ama-24 ukuya kwengama-28 sokukhulelwa kwiphrofayli ye-endocrinological / yezokwelapha.
Inhloso yokulaliswa esibhedlela: ukulungiswa nokulawulwa kwezinkinga zokuphazamiseka kwesifo sikashukela nokudla okuncane.
Ukungeniswa esibhedlela kwesithathu Kwenziwa emnyangweni wezifo zokwelapha izinhlangano ezikhulelwe ezithinta izingane amazinga angu-2-3
- ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2 esikhathini amasonto angama-38 kuya kokukhulelwa,
- nge-GDM - esikhathini amasonto angama-38- 39 ekhulelwe.
Inhloso yokulaliswa esibhedlela wukuhlola usana, ukulungiswa kokulashwa kwe-insulin, ukukhethwa kwendlela nesikhathi sokubeletha.
* Kungenzeka ukuphatha abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela besesimweni esanelisayo ngesizathu sokuphuma, uma isifo sikashukela sinxephezelwa futhi kwenziwa zonke izivivinyo ezidingekayo.
Amaminithi emihlangano ye-Expert Commission on Developmentcare Development of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, 2014
1. Inhlangano Yezempilo Yomhlaba. Isincazelo, Ukuxilongwa, kanye Nokwahlukaniswa Kwesifo Sikashukela Mellitus kanye ne-Complicatios yayo: Umbiko wokubonisana we-WHO. Ingxenye 1: Ukuxilongwa kanye nokuhlukaniswa kwesifo sikashukela i-Mellitus. IGeneva, Inhlangano Yezempilo Yomhlaba wonke, 1999 (WHO / NCD / NCS / 99.2). 2 I-American Diabetes Assotiation. Izinga lokunakekelwa kwezokwelapha isifo sikashukela-2014. Ukunakekelwa Kwesifo Sikashukela, 2014, 37 (1). 3. Ama-algorithms wokunakekelwa kwezokwelapha okukhethekile kweziguli ezinesifo sikashukela. Umq. Mina. I-Dedova, M.V. Shestakova. Inkinga yesi-6. M., 2013. 4. Inhlangano Yezempilo Yezwe. Ukusetshenziswa kwe-Glycated Hemoglobin (HbAlc) ku-Diagnosis of Diabetes Mellitus. Umbiko Ochaziwe we-WHO Ukubonisana. Inhlangano Yezempilo Yomhlaba wonke, ka-2011 (WHO / NMH / CHP / CPM / 11.1). 5. Imvumelwano kazwelonke yaseRussia yokuvumelanisa "i-Gestationalabetes mellitus: ukuxilongwa, ukwelashwa, ukuqapha kwangemva kokubeletha" / Dedov II, Krasnopolsky VI, Sukhikh G.T. Esikhundleni seqembu elisebenzayo // Isifo sikashukela. - 2012. - Cha. 4. - S. 4-10. 6. INurbekova A.A. Isifo sikashukela mellitus (ukuxilongwa, izinkinga, ukwelashwa). Incwadi Yombhalo - I-Almaty. - 2011 .-- 80 s. 7. Bazarbekova RB, Zeltser M.E., Abubakirova Sh.S. Ukuvumelana kokuxilongwa nokwelashwa kwesifo sikashukela. I-Almaty, 2011. 8. Izinkinga ezikhethiwe ze-perinatology. Kuhlelwe nguProf R.Y. Nadisauskene. Umshicileli Lithuania. 2012 652 p. 9. National Obstetrics Management, eyahlelwa ngu-E.K. Aylamazyan, M., 2009. 10. Protocol ye-Nice on Diabetes ngesikhathi sokukhulelwa, ngo-2008. 11. I-insulin yokwelashwa okugxile ekuhlolweni kwe-insulin kanye nokuqapha okuqhubekayo kweglucose. Kuhlelwe nguJohn Pickup. I-OXFORD, UNIVERSIT PRESS, 2009. 12.I. Blumer, E. Hadar, D. Hadden, L. Jovanovic, J. Mestman, M. Hass Murad, Y. Yogev. Isifo Sikashukela nokukhulelwa: Umhlahlandlela Wokuzivocavoca We-Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab, Novemba 2-13, 98 (11): 4227-4249.
I-III. IMINININGWANE YOKUHLANGANYELWA KOKUSETYENZISWA KWESITOLO
Uhlu lwabathuthukisi be-protocol abanemininingwane yokufanelekela:
1. UNurbekova AA, MD, uprofesa woMnyango we-Endocrinology yeKazNMU
2. Doschanova A.M. - I-MD, uprofesa, udokotela wesigaba esiphakeme kunazo zonke, inhloko yoMnyango Wezokubelethisa kanye ne-gynecology ye-internship ye-JSC "MIA",
3. USadybekova G.T-- ukhetho lwezesayensi yezokwelapha, uprofesa ohambisana naye, udokotela wesigaba esiphakeme kakhulu se-endocrinologist, uprofesa ohambisana naye woMnyango Wezifo Zangaphakathi Zokuhlanganisa i-JSC "MIA".
4. I-Ahmadyar N.S., MD, Udokotela Omkhulu Wemitholampilo, i-JSC "NNCMD"
Ukubonisa ukungqubuzana kwenzalo: cha.
UKosenko Tatyana Frantsevna, ukhetho lwezesayensi yezokwelapha, uprofesa oxhumana naye woMnyango we-Endocrinology, i-AGIUV
Ukukhonjwa kwezimo zokuvuselela imigomo: Ukubuyekezwa kwesivumelwano ngemuva kweminyaka engu-3 kanye / noma kokufika kwezindlela ezintsha zokuxilongwa / ukwelashwa ngezinga eliphakeme lobufakazi.
Kwabesifazane abakhulelwe, ukuxilongwa kwesifo sikashukela kwenziwa ngesisekelo sokuchazwa kwelebhu yezinga le-glucose ye-venous plasma kuphela.
Ukuhunyushwa kwemiphumela yokuhlolwa kwenziwa ngabachwepheshe bezokubelethisa, odokotela abajwayelekile, abasebenza ngokujwayelekile. Ukubonisana okukhethekile okwenziwa yi-endocrinologist ukuthola iqiniso lokwephulwa kwe-carbohydrate metabolism ngesikhathi sokukhulelwa akudingekile.
Ukuxilongwa kokuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism ngesikhathi sokukhulelwa Kwenziwe ngezigaba ezi-2.
1 ISIGABA. Lapho owesifazane okhulelwe eqala ukuvakashela udokotela wanoma yikuphi okukhethekile amaviki angama-24, esinye sezifundo ezilandelayo siyimpoqo:
- ushukela we-plousma glucose osheshayo (i-venous plasma glucose unqunywa ngemuva kokuzila kokudla okungenani amahora angama-8 futhi kungabi amahora angaphezu kwayi-14),
- I-HbA1c isebenzisa indlela yokuqashelwa eqinisekiswe ngokuya ngeNational Glycohemoglobin Standartization Programme (NGSP) futhi yafaniswa ngokwamanani wereferensi amukelwe ku-DCCT (Isifo Sikashukela Sokulawulwa Kwesifo Sikashukela),
- i-venous plasma glucose nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma ngabe ukudla kungakanani.
Ithebula 2 Imisango ye-plousma glucose yokutholakala kwesifo sikashukela esibonakalayo (sokuqala ukutholwa) ngesikhathi sokukhulelwa 2, 5
Isibonakaliso (sokuqala sitholakale) sikashukela kwabesifazane abakhulelwe 1
Ukusheshisa i-venous plasma glucose ≥7.0 mmol / L
I-glous plasma glucose, kungakhathalekile isikhathi sosuku noma sokudla okunezimpawu ze-hyperglycemia ≥11.1 mmol / L
1 Uma amanani angajwayelekile atholakala okokuqala futhi kungekho zimpawu ze-hyperglycemia, khona-ke ukuxilongwa kwesifo sikashukela esibonakalayo ngesikhathi sokukhulelwa kufanele kuqinisekiswe ngokuzila kwe-venous plasma glucose noma i-HbA1c isebenzisa izivivinyo ezimele. Uma kunezimpawu ze-hyperglycemia, ukuzimisela okukodwa ebangeni lesifo sikashukela (i-glycemia noma i-HbA1c) kwanele ukuthola ukutholakala kwesifo sikashukela. Uma kutholakala isifo sikashukela, kufanelekile ngokushesha kunoma yisiphi isigaba sokuxilonga ngokusho kwesigaba se-WHO samanje, isibonelo, thayipha isifo sikashukela esingu-1, uhlobo 2 sikashukela, njll.
I-2 HbA1c isebenzisa indlela enqunyelwe eqinisekiswe ngokuya ngeNational Glycohemoglobin Standartization Programme (NGSP) futhi yafaniswa ngokwamagugu wereferensi amukelwe ku-DCCT (Isifo Sikashukela Sokulawulwa Kwesifo Sikashukela).
Esimweni lapho imiphumela yocwaningo ifana nesigaba sesifo sikashukela esibonakalayo (sokuqala sitholakele), uhlobo lwayo luchaziwe bese isiguli sidluliselwa ngokushesha ukuze siqhubeke nokuphathwa ku-endocrinologist.
Uma izinga le-HbA1c IGDM yesikhathi sokuqala
I-glous plasma glucose 1, 2 mmol / l
Esiswini esingenalutho ≥ 5.1, kepha
1 Kuhlolwa kuphela glucose we-venous plasma. Ukusetshenziswa kwamasampula egazi wonke we-capillary akukhuthaziwe.
2 Kunoma yisiphi isigaba sokukhulelwa (inani elilodwa elingajwayelekile lokukalwa kwezinga le-glucose le-venous plasma lanele).
Lapho isetshenziswa okokuqala ngabesifazane abakhulelwe nge BMI ≥25 kg / m2 nokuba nokulandelayo izici zobungozi 2, 5 kuqhutshwe HRT ukuthola uhlobo lwesifo sikashukela esifihliwe (Ithebula 2):
• Ukuphila kokuhlala phansi
• Izihlobo zomugqa wokuqala ezinesifo sikashukela
• Abesifazane abanomlando wokubeletha isibeletho esikhulu (ngaphezu kwe-4000 g), ukuzala noma isifo sikashukela esisunguliwe
• umfutho wegazi ophakeme (≥140 / 90 mm Hg noma i-antihypertensive therapy)
• Izinga le-HDL 0,9 mmol / L (noma 35 mg / dl) kanye / noma izinga le-triglyceride 2.82 mmol / L (250 mg / dl)
• ukuba khona kwe-HbAlc ≥ 5.7% ukubekezelelwa kokulimala kwe-glucose noma i-glucose engasebenzi kahle
• Umlando wesifo senhliziyo
• ezinye izimo zomtholampilo ezihambisana nokungahambisani ne-insulin (kufaka phakathi ukukhuluphala kakhulu, i-acanthosis nigrikans)
• I-polycystic ovary syndrome
2 ISIGABA - Kwenziwa ngesonto lama-24-28 lokukhulelwa.
Kubo bonke abesifazane, lapho isifo sikashukela singazange sitholakale lapho sikhulelwe ekuqaleni kwesifo, ukutholakala kwe-GDM, i-PGTT kwenziwa ngo-75 g we-glucose (Isithasiselo 2).
Ithebula 4 Imisango ye-plousma ye-glucose yokuxilongwa kwe-GDM 2, 5
I-GDM, isivivinyo sokubekezelela i-glucose (PGTT) nge-75 g ushukela
IVenous Plasma Glucose 1,2,3 mmol / l
Ngemuva kwehora eli-1 ≥10,0
Ngemuva kwamahora ama-2 ≥8,5
3 Ngokusho kwemiphumela ye-PHTT enama-75 g we-glucose, okungenani inani elilinganayo le-venous plasma glucose out of ezintathu, elingalingana noma liphakeme kunomkhawulo, lanele ukusungula ukutholakala kwe-GDM. Lapho sekutholwe amanani angajwayelekile esilinganisweni sokuqala, ukulayishwa kwe-glucose akwenziwa; lapho sekutholakele amanani angajwayelekile endaweni yesibili, akudingeki isilinganiso sesithathu.
I-glucose esheshayo, imitha ye-glucose engahleliwe ene-glucometer, kanye ne-glucose yomchamo (ukuhlolwa komchamo we-litmus) akunconyiwe ukuhlolwa kokuthola i-GDM.
Imithetho yokwenza i-PGTT
I-PGTT ene-75 g ye-glucose ukuhlolwa kokuhlola umthwalo okuphephile ukuthola ukuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukuhunyushwa kwemiphumela ye-PHT kungenziwa ngudokotela wanoma yikuphi okukhethekile: i-obstetrician, gynecologist, udokotela ojwayelekile, i-endocrinologist.
Ukuhlolwa kwenziwa ngemuva kokudla okujwayelekile (okungenani ama-150 g ama-carbohydrate ngosuku) okungenani ezinsukwini ezi-3 ngaphambi kocwaningo. Ukuhlolwa kwenziwa ekuseni ngesisu esingenalutho ngemuva kokusheshisa kwehora le-8-14 ebusuku. Ukudla kokugcina kufanele kube nama-30-50 g wama-carbohydrate. Ukuphuza amanzi akuvunyelwe. Ngesikhathi sokuhlolwa, isiguli kufanele sihlale. Ukubhema kuyenqatshelwa kuze kuqedwe isivivinyo. Imithi ethinta amazinga kashukela egazi (ama-multivitamini kanye namalungiselelo we-iron aqukethe ama-carbohydrate, ama-glucocorticoids, ama-β-blockers, ama-agonists ama-β-adrenergic) kufanele, uma kungenzeka, athathwe ngemuva kokuqedwa kokuhlolwa.
- nge-toxicosis yokuqala yabesifazane abakhulelwe (ukuhlanza, isicanucanu),
- uma kunesidingo, ukuhambisana nokuphumula kombhede okuqinile (ukuhlolwa akwenziwa kuze kukhule umbuso wezimoto),
- Ngokumelene nesizinda sesifo esibuhlungu kakhulu noma sokutheleleka,
- ngokwanda kwe-pancreatitis engapheli noma ukuba khona kwe-dumping syndrome (syndrome yesisu esenziwe kabusha).
Ukuhlolwa Kokukhanya Kweglucose yeVenous kwenziwa kuphela elabhorethri kwabahlaziyi be-biochemical noma kuma-glucose ukuhlaziywa.
Ukusetshenziswa kwamathuluzi okuzihlola ephathekayo (ama-glucometer) ekuhlolweni kuvinjelwe.
Isampula yegazi yenziwa nge -hubhu yokuhlola ebandayo (okungcono i-vacuum) equkethe izithako zokugcina amanzi: i-sodium fluoride (6 mg ngayinye nge-1 ml yegazi eliphelele) njenge-enolase inhibitor ukuvikela i-gontcolysis engazimele, kanye ne-EDTA noma i-sodium citrate njenge-anticoagulants. Ishubhu lokuhlola lifakwa emanzini eqhwa. Lapho-ke masinyane (kungakapheli imizuzu engama-30 elandelayo) igazi likhishwe phakathi ukuze lihlukanise i-plasma nezinto ezakhekile. I-Plasma idluliselwa kwelinye ishubhu lepulasitiki. Kulolu ketshezi lwezinto eziphilayo, ushukela ulinganiswa.
Isigaba sokuqala. Ngemuva kokuthatha isampula yokuqala yokuzila kwe-plousma yegazi ene-venous, izinga likashukela lilinganiswa ngokushesha, ngoba lapho sekutholwe imiphumela ekhombisa ukubonakala kwesifo sikashukela noma i-GDM, akusekho okunye ukulayisha ushukela okwenziwe bese kuvivinywa. Uma kungenakwenzeka ukucacisa ngokusobala izinga le-glucose, ukuhlolwa kuyaqhubeka futhi kuqedwe.
Isigaba sesibili. Lapho uqhubeka nokuhlolwa, isiguli kufanele siphuze isisombululo se-glucose imizuzu emi-5, okubandakanya u-75 g we-glucose eyomile (i-anhydrite noma i-anhydrous) encibilikisiwe ku-250-300 ml wamanzi afudumele (37-40 ° C) okuphuza amanzi angenawo i-carbonated (noma ancishisiwe). Uma kusetshenziswa i-glucose monohydrate, ama-82,5 g ento edingekayo ekuhlolweni. Ukuqala isixazululo sikashukela kubhekwa njengokuqala kokuhlolwa.
Isigaba sesithathu. Amasampula egazi alandelayo ukuthola inani le-glucose le-plousma ye-venous athathwa 1 kanye namahora ama-2 ngemuva kokulayisha kwe-glucose. Ngemuva kokuthola imiphumela ekhombisa i-GDM ngemuva kwesampula ye-2nd yegazi, ukuhlolwa kuyamiswa.
Uhlelo lwe-LMWH lusetshenziswa njengendlela yesimanje yokuhlonza ushintsho kwi-glycemia, ukuhlonza amaphethini nezimo eziqhubekayo, ukuthola i-hypoglycemia, ukuqhuba ukulungiswa kokukhetha nokukhetha i-hypoglycemic therapy, kusiza ukufundisa iziguli nokubamba iqhaza kwazo ekwelashweni kwazo.
I-NMH indlela yesimanjemanje futhi enembile ngokuqhathaniswa nokuzihlola ekhaya. I-NMH ikuvumela ukukala amazinga we-glucose ku-inflellular fluid njalo ngemizuzu emi-5 (ukukalwa okungama-288 ngosuku), ukuhlinzeka udokotela kanye nesiguli ngolwazi oluthe xaxa ngamazinga we-glucose kanye nezinto ezenzeka ekugxileni kwalo, kanye nokunikeza amasignali athusayo we-hypo- ne-hyperglycemia.
- iziguli ezinezinga le-HbA1c ngaphezulu kwamapharamitha okuhlosiwe,
- Iziguli ezinokungaboni kahle kahle phakathi kwezinga le-HbA1c nezinkomba eziqoshwe kudayari,
- iziguli ezine-hypoglycemia noma ezimweni zokusolwa kokunganakwa ekuqaleni kwe-hypoglycemia,
- iziguli ezinokwesaba i-hypoglycemia ephazamisa ukulungiswa kokulashwa,
- izingane ezinokwehluka okuphezulu kwe-glycemia,
- abesifazane abakhulelwe
- imfundo yeziguli nokuzibandakanya ekwelashweni kwabo,
- Izinguquko ekuziphatheni kokuziphatha ezigulini ebezingatheleleki ekuziqapheleni kwe-glycemia.
Ukunakekelwa kokukhulelwa okukhethekile kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela